လာရောက်ဖတ်ရှုကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါရှင် Mee Mee Thaw Gyi
မီသော်ကြီးတစ်ရောက်လည်း ထိုသို့နှယ် ဤသို့နှယ် ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်နေပါပြီ။ ဘလော့အနားလည်း မကပ်နိုင်၊ စွဲလမ်းလာခဲ့သမျှ ချက်တင်လည်း မ၀င်ဖြစ်။ ဒါဟာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လည်း ဆိုပြီးတော့လည်း အပြစ်ကမတင်နိုင်။ ကိုယ်ကိုတိုင် ကျေနပ်စွာနဲ့ ခြေလှမ်းစခဲ့မိတဲ့ဟာကိုး...။ ဟုတ်ပါတယ်။ မီးသော်ကြီး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ခုတော့လည်း နေသားကျလို့ အဆင်ပြေစလည်း ပြုနေပါပြီကော။ ခက်တာက သံယောဇဉ်ကမပြတ်။ မအားတာ ကြားထဲ ယားနာကပေါက်ချင်။ ခက်တော့ ခက်နေသား။ အဲဒီတော့လည်း ချောက်တီးချောက်ချက်လေးနဲ့ ချက်တင်လောကမှာ သရဲခြောက် သလိုလိုနဲ့ ခဏတဖြုတ်ချက်လိုက် ဘလော့ကြတော့လည်း ပြောရမယ်ဆိုရင် အားလည်းနာတယ် ခင်လည်းခင်တယ်ပေါ့လေ လမ်းကြုံရင် ၀င်ကြည့်လိုက် ခုလို အချိန်အားလေးရတုန်း ပေါက်ကရ လမ်းမတန်းတာလေးတွေ သူများမျက်လုံးညောင်းအောင် ရေးသွားလိုက်ပေါ့.။ မီးသော်ကြီးက လမ်းကြုံလို့ ပေါက်တတ်ကရ ၀င်ရေးသွားတာမျိုးလေးတွေကို ခင်တဲ့သူတွေကိုတော့ အတင်းအဓ္ဓမ ဖတ်ခိုင်းတာမျိုးနဲ့ အားပေးခိုင်းလိုက်။ ဒါမှမဟုတ် လမ်းကြုံရေးတဲ့စာကို လမ်းကြုံရင်းနဲ့ ၀င်ဖတ်ရင်း မျက်လုံးညောင်းစေတာမျိုးနဲ့ပဲ လှုပ်လှီလှူပ်လှဲ့ ဘလော့လေးကို ဆက်လက် တည်နေဦးတော့မပေါ့နော်။
မီးသော်ကြီးလည်းလေ မအားပါဘူးဆိုမှ ရေးဖြစ်လိုက်တဲ့စာတွေများ။ အတော်ကိုများပေါ့။ အဟိ။ တကယ်ပြောတာနော် ဟောတစ်ပုဒ် ဟောတစ်ပုဒ်နဲ့ကိုနေတာ။ မယုံမရှိနဲ့ ။ တကယ်ပါဆိုနေ။ ဒါဆိုဘယ်မှာလဲ။ အဲစာတွေပြလေ ဟုတ်လား။ အဟီး အဲလိုမေးလာရင်တော့ အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောလိုက်မယ်နော်။ ပန်းကန်တွေဆေးရင်း စိတ်ကူးနဲ့ ရေးတာတွေ။ ဟင်းချက်ရင်း ဆီသတ်ရင်းနဲ့ ရေးလိုက်တာတွေ။ အ၀တ်တွေ လျှော်လှမ်းရင်းနဲ့ ရေးလိုက်တာတွေမှ။ များကြီး။ အဟီး ဒီဘလော့ထိ သယ်မလာနိုင်တာတော့ စိတ်မကောင်းစရာ။ တကယ်ရေးလိုက်တာ ... အဲချိန်ကျမှပဲ စာလုံးတွေကလည်း ရှောလို့။ စိတ်ကူးနဲ့ ရေးလိုက်တာများ စက်သေနတ်ပစ်သလို … ဒက် ... ဒက် ... ဒက်နဲ့ နေတာပဲ။ အတွေးတွေ ကောင်းလိုက်တာများ။ တစ်စုံတစ်ခုက တိုက်ဆိုင်လိုက် သတိရလိုက် အဲချိန်ကတော့ ဟောတွေးရင်းနဲ့ ရေးလိုက်တာ စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားပြန်လေရော။ တိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်းတာလား ... စာရေးဖို့ လမ်းစပေါ်ပြီး ဟိုသတိရ ဒီသတိရနဲ့ပဲ ဖြစ်နေတာလားတော့ မသိဘူး။ ဟင်းအိုးတူးတာမျိုးတို့ ရေတွေ လျှံကုန်တာမျိုးတို့နဲ့ လုံးချာလည်ရင်း ဘလော့မှာ စာပေါင်းများစွာကို စိတ်ကုးနဲ့ တင်ဖြစ်နေတော့တာပဲ။ ကဲ ခုတော့ လက်တွေ့ ရောက်လာပြီပေါ့လေ။ အများသူငါ မျက်လုံးညောင်းသော ဒုက္ခ ခံယူတော်မူလိုက်ကြပါဦးနော်။
ခုတလော တွေးတွေးနေမိတယ်။ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမဆိုတဲ့ အတွေး။ သူများတွေတော့ ပြောရော့မယ်။ ခုမှ တွေးမိရသလား။ လူပဲအိုသေတော့မယ်လို့ ပြောလည်း ခံယုံပဲ။ အဟုတ်ပဲ အခုတစ်လောမှကိုပဲ တွေးမိနေတာ။ စေ့စေ့တွေးတော့ ရေးရေးပေါ် ဆိုတာမျိုးလိုပဲ။ သေချာတွေးလေ ဘ၀င်မကျလေ။ သေချာတွေးလေ နားမလည်လေပဲ။ ခက်တာပဲနော့်။ မတွေးမိတာမှ ကောင်းသေးတယ်။ ခုတော့လည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း တွေးမိနေပြီ။ ကဲ ... အဲဒီလိုဆိုမှတော့လည်း မထူးတော့ဘူးနော့်။ ဆက်ပြီး သဘာဝ သပွတ်အူကို အစရှာရင်း ဘာကိစ္စ ဒီလောက်ရှုပ်ရသလဲဆိုတာ အပြစ်တင်ကြည့်ကြပါစို့...။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ရာဇ၀င်တလျှောက်ပဲဆိုဆို၊ သမိုင်းကာလ အားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်လာပဲပြောပြော မိန်းမဆိုတဲ့ ထိုဣတ္ထိယကို ခွေးထီးလောက်တောင်မှ မမြင့်မြတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်သူမဆိုပေါ့လေ။ မန်လည်ဆရာတော်မှစလို့ ပြော၇မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ မနေ့ကအထိ နောက်ဆုံး အသည်းကွဲပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ ယောက်ျားလေးပေါင်းများစွာအထိ ဆိုပါတော့။ အပြစ်တင် စကားလုံးပေါင်းများစွာ၊ တင်စားမှုပေါင်းများစွာနဲ့ ပြောဆိုလာလိုက်ကြတာ သမိုင်းတစ်ခု သက်တမ်းတစ်လျှောက် တည်ခဲ့သမျှ သက္ကရာဇ်ပေါင်းများစွာမှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်။
အင်း ... ဟုတ်တယ်။ ဘာလို့လဲ အဲတာ။ စာဖတ်နေတဲ့ အပေါင်းအသင်းရယ်။ တွေးကြည့်ပါဦးလား။ မီးသော်ကြီးလည်း ဥာဏ်မှီသလောက်တော့ တွေးကြည့်တယ်။ လာလေသယ်ဂျင်း။ အတူတူ တွေးကြည့်ကြရအောင်။ ဖြစ်တယ်ဟုတ်။
ဒီလိုလေ ... ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီလို အပြစ်တင်စကား မှန်သမျှကို ပြောလာခဲ့ကြတဲ့ တလျှောက်မှာ အဲဒီ မိန်းကလေးတွေကရော ဘာလို့ လက်ခံခဲ့ကြသလဲပေါ့။ ခရစ်တော်ရဲ့ အရဆိုရင် ဧ၀တွေပေါ့။ ဧ၀ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဣတ္ထိယပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကတော့ သေချာတာ မိန်းမသားထုပါ။ ဘာလို့ သူတို့တွေ လက်ခံခဲ့ကြလဲလို့ မေးရင် ပုရိသဆိုတဲ့ ယောက်ျားမှန်သမျှက တိုင်ပင်စရာမလိုပဲ တညီတညာတည်း ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်နေလို့ လက်ခံနေကြတာပေါ့လို့။ ယောက်ျားဆိုတာ မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ မိန်းမ ဆိုတာ မြစ်တစင်းလိုပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး အားလုံးဟာ တူညီတဲ့ အဖြေတစ်ခုတည်းကိုပဲ ပေးကြမှာအမှန်ပဲ။
ကဲ ... အဲလိုဆိုရင် အဲတာကိုထားပြီး အဲလို ဖြစ်ရခြင်းအပေါ်ကို သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်လားနော်။ မသုံးသပ်ကြည့်ခင် တစ်ခုတော့ ပြောထားလိုက်ဦးမယ်။ မိန်းမတွေထက် ခွေးထီးက မြတ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမှာပဲ ဆိုပါဆို့ ... မိန်းမတွေက သွားရောက်ဖူးမျှော်လို့ မရပါဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ လူမဟုတ်တဲ့ ခွေးဆိုတဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်က ဟိုဟိုဒီဒီ ကူးလားခတ်ပြီး သွားလို့ရနေတာဟာ သူဟာ အထီးဆိုတဲ့ ပုရိသအနွယ်ဝင် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒါကိုလက်ခံတယ်။ အဲလို လက်ခံထားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကျန်တာကို ဆက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်။
ယောက်ျားသားထုတွေဆီက ဒီလို အပြစ်တင်စကားမှန်သမျှကို ဘာလို့ မိန်းမသားတစ်ထုလုံး လက်ခံနေကြသလဲ ဆိုတာက စကြမယ်နော်။ ဘာလို့ လက်ခံနေကြသလဲ။ မိန်းမတွေကရော ဒါမျိုး မပြောတတ်တော့ဘူးလား။ ဘယ်ဟုတ်ပါ့လေမလဲရှင်။ တစ်ကယ်ဆို စကားအရာနဲ့ဖြစ်စေ၊ စာနဲ့ပေနဲ့ဖြစ်စေ၊ ပြောတတ်ကြတာပေါ့။ ကျားနဲ့မ ဆိုတာ လိင်ကွာခြားတာပဲရှိတယ်။ ပြောရမယ် ဆိုရင် လူုတွေချည်းပဲ မဟုတ်လား။ ပြောတတ် ဆိုတတ် ကြတာပေါ့။ ဒါဆို ဘာလို့ မပြောကြသလဲ။ ဘာလို့ မပြောကြသလဲ ဆိုရင် သည်းခံနိုင်စွမ်းကြောင့်၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းကြောင့် သူမတူတဲ့ စွမ်းအားတစ်မျိုးကြောင့်သာလျှင် ဒီလိုမျိုး စကားနည်းရန်စဲ သဘောနဲ့ နေလာခဲ့ကြတာပေါ့။ မိန်းကလေးဆိုတာ အမိဝမ်းမှ ကျွတ်လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မိန်းကလေးရယ်လို့ ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ သူဟာ မိခင်လောင်း တစ်ယောက်ပါပဲ။ သဘာဝတရားအရ သူဟာ မိခင်လောင်း တစ်ယောက်ပါပဲ။ အဲဒီအတွက်နဲ့တင် သူဟာ နူးညံ့တဲ့ စိတ်ထားရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ်။ ဘယ်သူမဆို တွေးကြည့်လေ မိခင်လောက် ဘယ်သူကများ ကိုယ့်အပေါ်ကို ဂရုစိုက်လဲ မိခင်လောက်များ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း ရှိသလဲဆိုတာ။ မာတာပီတု ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘာလို့ မာတာဆိုတဲ့ မိခင်က ရှေ့က ရှိနေသလဲ။ မိန်းမဆိုတာ ပျော့ညံ့တတ်လွန်းတာထက် နူးညံ့သိမ်မွေ့တာပါ။
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာကြတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုမှာ ဆိုပါတော့။ ပြဿနာ ဖြစ်လာကြတယ် ဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ ယောက်ျားလေးတွေဟာ မင်းတို့မိန်းမတွေ ဒီလိုကြီးပဲ၊ မင်းတို့မိန်းမတွေအားလုံးက ဒီလိုပဲ ဆိုပြီး ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ အဲဒီ ယောက်ျားလေးကရော ဒီလိုချည်းပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ အားလုံးကရော ဒီလိုကြီးပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ဇွတ်မညင်းပါနဲ့။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောတာပါလို့လည်း မပြောပါနဲ့လေ။ အားလုံးက ညီမျှချင်းတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာ တစ်ဖက်စီ ရှိနေကြတာပါ။ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းမသိမ်းပါနဲ့လို့ မပြောနဲ့။ ဒါဟာလည်း ညီမျှခြင်းတစ်ခုအလည်မှာ ရှိနေတယ်။ အမှန်ဆို အားလုံးဟာ ညီမျှခြင်းတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရှိနေကြတာပါ။
မင်းတို့မိန်းမတွေကြောင့် ဘ၀ပျက်ခဲ့ရတာတွေ ရေတွက်လို့တောင်မှ မနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလာရင်၊ ယောက်ျားလေး ရာခိုင်နှုန်း အတော်များများကြောင့် ဘ၀ပျက်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေလို ရင်ဘောင်တန်းပြီး ကြွေးကြော်ခဲ့ကြမယ် ဆိုရင် ဘယ်သူ အားသာမယ်ထင်သလဲနော်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်ထိပဲ ရက်စက်ခဲ့စေဦးတော့ နောက်ဆုံးမှာ သူဟာ အမြဲ ရှုံးနိမ့်သူ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါဘာလို့လဲ။ နောက်ဆုံးမှာ သူ့မရဲ့ နူးညံ့လှတဲ့စိတ်ထား မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာသာလျှင် ရှိတတ်သော ထိုစိတ်ထားက အလျှော့ပေးလိုက်လေ့ ရှိသောကြောင့်လို့ ပြောရမယ်။
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ အချစ်ဦးကိုမှ လိုချင်တယ်။ တွေးကြည့်မိရဲ့လား။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကရော တန်းတူ အချစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုပဲ လိုချင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကို။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားကောင်းတော့ မောင်းမတစ်ထောင် ဆိုပြီး ဟစ်ကြွေးကြတယ်။ ဒါကို မိန်းမသားတစ်ထုလုံးက နားလည်လက်ခံပေးနိုင်ပေမယ့်လို့။ ရည်းစားတစ်ထောင် လင်ကောင်တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ စကားကိုကြတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကတောင်မှ ဘာလို့ လက်မခံမပေးနိုင်ရသလဲ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ လူငယ်သဘာဝ ချစ်ကြိုက်လာကြမယ်။ အဲနေရာမှာ နမ်းကြတယ်။ ရိုင်းတယ်လို့ ထင်ပေမယ့် တွေးကြည့်ပါရစေ။ မိန်းကလေးတိုင်းကို နမ်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အနမ်းကို နှစ်သက်သဘောကျသူ မိန်းကလေးလည်း ကိုယ့်ချစ်သူဆိုပြီး လက်ခံနိုင်ပေမယ့်လို့ ယောက်ျားလေးတိုင်းက နမ်းခဲ့မယ်ထင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မိမိ သဘောကျတယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ဘာလို့ မနမ်းချင်ရသလဲ။ ဒါဟာ ယောက်ျားလေး ဆိုတဲ့ ပုရိသတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တပဲ မဖြစ်ပေဘူးလား။
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြသည် ဆိုပါတော့။ နောက်ဆုံးမှာ ပြဿနာတက်မယ်။ ဇာတ်သိမ်းမလှဘူး။ အဲနေရာမှာ ယောက်ျားလေးက နောက်ဆုံး ပွဲသိမ်းမှာ ရေရွတ်လေ့ ရှိတာက မိန်းမတွေ မကောင်းကြောင်းပါ။ ဘယ်ချိန်ထိမဆို သူတို့ဟာ အဲဒီ နားကျည်းမုန်းတီးတဲ့စိတ်ကို သယ်ဆောင် ယူသွားနိုင်ကြတယ်။ နှစ်ဘယ်လောက်ကြာမှ ဖြစ်ပါစေ သတိရလိုက်မိချိန်တိုင်းမှာ နာကျည်းမှုနဲ့အတူု ပေါက်ကွဲ ဒေါသထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ မတူညီတာကတော့ မိန်းကလေးတွေက အဲလို မဟုတ်ကြပါဘူး။ နာကျည်းမယ်၊ မုန်းတီးမယ် နောက်ဆုံးမှာ အညှိုးအတေး ထားခဲ့ကြမယ် ဆိုရင်တောင်မှ တဖက်သားက အလျှော့ပေးမယ် ၀န်ချတောင်းပန်လာမယ် နားလည်မှုတွေ ပေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ နာကျည်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က အလိုလို ခွင့်လွှတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပဲ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မသိစိတ်မှာ လွှမ်းမိုးထားလေ့ရှိတဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းအား တစ်ခုကြောင့်ပါပဲ။ အကယ်၍ ထိုမိန်းကလေးက ခေါင်းမာနေပြီး အတ္တကြီးနေမယ် ဆိုရင် အဲတာဟာ သူ့ရဲ့ ဟန်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ ဥပမာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် အနိုင်ရလိုစိတ် တစ်ခုကြောင့်သာ သူဟာ ဆက်ပြီး ဟန်ဆောင်နေတာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့ချိန်မှာ သူမဟာ အဲလိုပဲ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ အပေါင်းအသင်း ထင်မိပါသလား။ အမှားကြီး မှားသွားလိမ့်မယ် သူငယ်ချင်း။ အဲလို မိန်းကလေးတွေဟာ ပိုပြီး အထီးကျန်ပြီး ၀မ်းနည်းတတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက် သို့မဟုတ် မြှုပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အားကိုးရာ ပုရိသတစ်ယောက်ကို သူမဟာ တမ်းတပြီး အားကိုးစိတ်နဲ့ အဖေါ်မဲ့နေမှာပဲ။
နောက်ပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကတိမတည်နိုင်ဘူးလား။ သူငယ်ချင်းရော ဘယ်လိုထင်လဲနော်။ မီးသော်ကြီးကတော့ ထင်ရာတွေ ဆက်ရေးလိုက်ဦးမယ်။ ယောက်ျားကတိကွ တည်တယ်။ မင်းတို့မိန်းမတွေလို မဟုတ်ဘူး။ ကတိမတည် သစ္စာမရှိတဲ့ မင်းတို့မိန်းမတွေလို မဟုတ်ဘူးကွ ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် မြန်မာဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်း အတော်များများမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ယောက်ျားလေးတိုင်းကရော ကတိတည်ကြလို့လား။ မင်းမှာသစ္စာ လူမှာကတိဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားတစ်ခုကို ကြားဘူးတယ်။ အမှန်မှာတော့ ယောက်ျားကတိ၊ မိန်းမကတိ ဆိုပြီး ခွဲထားခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ လူမှာကတိဆိုပြီးပဲ ရှေးလူကြီးတွေ သုံးခဲ့ကြတာပါ။ ကတိတည်တဲ့ မိန်းမတွေ ရေတွက်လို့ မရနိုင်အောင်ရှိသလို ကတိမတည်တဲ့ ယောက်ျားတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ တကယ်တမ်းမှာ မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားတွေလောက် ကတ်တွက်တတ်တဲ့ စိတ်မရှိလို့သာလျှင် ဒါတွေကို မသိယောင်ဆောင်ပေးရင်း နားလည်မှုနဲ့ နေပေးနေကြတာတွေပါ။
ပြောကြစတမ်းဆိုရင်တော့ ဒါဟာ စကားရည်လုပွဲတစ်ခု ဖြစ်သွားမှာ အမှန်ပဲ။ ယောက်ျားလေးက မိန်းကလေးနဲ့ ကင်းနိုင်ကြတာလည်း မဟုတ်သလို မိန်းကလေးကလည်း ယောက်ျားလေးနဲ့ ကင်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေး မစွမ်းဆောင်နိုင်တာကို မိန်းကလေးက စွမ်းဆောင်နိုင်တာရှိသလို၊ မိန်းကလေး မစွမ်းဆောင်နိုင်တာလည်း ယောက်ျားလေးစွမ်းဆောင်နိုင်တာ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝတစ်ရားကြီးက ဖန်တီးထားတဲ့ သဘာဝတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ ကင်းအောင်နေလို့လည်း မရဘူး။ သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူ ရှိနေပြီးသား သူ့ဖြည့်ဆည်းချက်နဲ့သူ ရှိနေပြီးသားဖြစ်လို့ ဒါဟာ ယောက်ျားမိန်းမ ဆိုပြီး ခွဲခြားနေစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ မိန်းမဆိုတာ မကောင်းဘူးလို့ ကြွေးကြော်တဲ့ ပုရိသ အတော်များများဟာ တစ်ချိ်န်မှာ သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ အဲဒီ မကောင်းမှန်း သိနေတဲ့ ဣတ္ထိယကို ရှောင်ကွင်းပြီး မသွားနိုင်ပါဘူး။ အလားတူပဲ မိန်းမဆိုတာလည်း ပုရိသနဲ့ မကင်းကွာနိုင်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင့် ခံစားမှုတွေ အလွန်အကျွံဖြစ်ပြီး နေထိုင်မှုပုံစံကိုပါ သွားရောက်ထိခိုက်လို့ မိန်းကလေးကို အပြစ်တင်ကြမယ် ဆိုရင် တကယ်တမ်း အပြစ်ရှိသူဟာ ထိုယောက်ျားလေးသာလျှင် ဖြစ်တယ်လို့ တွေးကြည့်မိပါရဲ့လား။ သူဟာ အဲလိုဖြစ်စေဖို့အတွက် သူကိုယ်တိုင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အခွင့်အရေးတွေ ပေးခဲ့လို့သာလျှင် ထိုမိန်းကလေးက ထိုသို့ လုပ်ခွင့်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်လို့လေ။
တကယ်တမ်း လက်တွေ့ဘ၀မှာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကလည်း တီးတိုးတိုင်ပင်ဖေါ်၊ ဆေးပေးမီးယူ ဆိုတာမျိုးနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လိုအပ်သလို မိန်းမသားဘ၀မှာလည်း အလံမရှိတဲ့ရထား၊ တံခွန်မရှိတဲ့ဘုရား၊ လင်သားမရှိသောမိန်းမ ဆိုတဲ့ စကားတွေခံပြီး အမှန်တကယ် ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးနိုင်မယ့် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လိုအပ်တာ အမှန်ပဲ။ ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမှ ကျားကမကိုဖြစ်စေ မကကျားကိုဖြစ်စေ ကင်းကွာပြီး နေဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူမှတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သာတူညီမျှတွေးပြီး တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေနဲ့ တွေးပြီး ဖြည့်ဆည်းနေထိုင်ကြတာ အသင့်တော်ဆုံးပဲ မဟုတ်လားနော်။ တစ်ယောက်ရဲ့ အပြစ်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြမယ့်အစား အဲလိုနေရာတွေမှာ နားလည်မှု ဆိုတာတွေနဲ့ အစားထိုးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေကြည့်ရင်ကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ မျက်မှန်စိမ်းကြီး တတ်ကြည့်ရင်တော့ အစိမ်းရောင်မြင်ကွင်းထဲမှာ အားလုံး ရောက်နေမှာပဲလေ။ ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်တတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။
မိန်းကလေးတွေက အမှတ်အတေးကြီးတယ် ဆိုကြပေမယ်လို့ အဲဒီအညှိုးတွေ အာဃာတတွေကို အင်နဲ့အားနဲ့ ကျောက်ခဲကျောက်ဆိုင်ပေါ်မှာ ရေးထွင်းထားကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သဲပြင်လို နေရာမျိုးမှာပဲ အလွယ်တကူ မှတ်ထားလိုက်ကြတာမျိုးတွေပဲပေါ့။ ရေတိုက်စား လေတိုက်စားပြီး အလွယ်တကူ ပျောက်ပျက်တတ်စေလိုက်တယ်လေ။ ဒါကြောင့်လည်း မိန်းမဆိုတာ နှာခေါင်းသာမပါရင် ဆိုပြီး နှိမ့်ချတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခံရတာပေါ့။ တစ်ကယ်လို့ မိန်းကလေးတိုင်းက သေချာမှတ်ထားပြီး ယောက်ျားလေးတွေလို တွက်ကတ်ပြီး လိုက်ပြောနေမယ်ဆိုရင် ကင်းကွာလို့ မရတဲ့သူတွေ အားလုံးက အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ပဲ လောက၀တ်တရား မကျေ ဖြစ်ကုန်ကြမှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် မိန်းမသားထုကြီးက အရာရာတိုင်းကို လိုက်ပြီး တွက်ကတ်မနေပဲ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဥပေက္ခာနဲ့ လက်ခံပေးနိုင်ကြလို့သာ ဒီလို အငြင်းပွား ငြင်းခုံမှုမျိုးတွေကို ရှောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။
ဘာပဲပြောပြောလေ ပုရိသဆိုတဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ ဣတ္ထိယဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ကင်းကွာပြီး သီးခြားရပ်တည် နေကြတာမှ မဟုတ်လေတော့ ... (ရဟန္တာ၊ သူတော်စင် ပုဂ္ဂိုလ်များ မပါဝင်ပါ) ကိုယ့်ရဲ့ နီးစပ်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို မျှဝေ နားလည်ပေးနိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ "ငါဒီလိုလုပ်တာ မကြိုက်ဘူး၊ ဒါမျိုး မကြိုက်ဘူး" လို့ တွေးမိရင် တစ်ဖက်က မိန်းကလေးမှာလည်း ကိုယ့်လိုပဲ ခံစားတွေးမိမှာပဲ ဆိုတာကို ဂရုစိုက်ပေးရင်းနဲ့ ကြင်ကြင်နာနာ မျှမျှတတ နေသွားရင် မကောင်းပေဘူးလားနော်။ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ချစ်တတ်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရာရာဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ နားလည်ပေးမယ့် အသိစိတ်နဲ့ ရင်းနှီးမှု ရယူမယ်ဆိုရင် အရာရာတိုင်းကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုတိုင်ကမှ မျက်မှန်စိမ်းကြီးတတ်ပြီး အမြင်တွေ မကြည်လင်ဘူးဆိုရင် ... မြင်မြင်သမျှ အရာရာတိုင်းက ဘာကိုမှ အဆင်ပြေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲကြောင့် မိမိကိုယ်သာလျှင် အကောင်းအဆိုးတွေကို ပြုသူဖြစ်တယ်ဟုတ်။
ယောက်ျားဆိုတဲ့ ပုရိသတွေသာလျှင် ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်နိုင်သူတွေပါ။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာလည်း သဘာဝ ပေးအပ်တဲ့ တာဝန်အရ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ဖခင်လောင်းတွေ ဖြစ်တယ်လေ။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ဦးဆောင်သူတွေလည်း ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ သဘာဝတရားကြီးဟာ ယောက်ျားလေး ဆိုတဲ့ ပုရိသနွယ်တိုင်းကို မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာ ပေးအပ်ထားခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့်လေ ထိုပုရိသများက အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမသားရယ်လို့ ရှေးအစဉ်အလာကတည်းက သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ ၎င်းဣတ္ထိယတွေ အပေါ်ကို စာနာနားလည်စိတ်၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်စိတ်တွေနဲ့ ခင်မင်ယုယ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလားနော်။
အင်း ... ရေးရင်းနဲ့ စာတွေလည်း ဟိုရောက်ဒီရောက် ...။ သေချာတာတော့ သပွတ်အူအစစ် ဖြစ်သွားတယ်။ မီးသော်ကြီးလည်း ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး ... တွေးမိတာတွေကို တွေးမိသလို ချရေးလိုက်တာ။ ဘယ်သူရယ် ဘာရယ် ဆိုပြီးတော့လည်း မရည်ရွယ်ဘူးပဲ။ တွေးမိတွေးရာနဲ့ လုပ်ချလိုက်တာ သပွတ်အူဇာတ် ဖြစ်နေတယ်။ သေချာတွေးလို့ ရေးရမယ်ဆိုရင်လည်း စကားနိုင်လုပွဲ ဖြစ်သွားမှာပဲ။ ဒါမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်ဘူး။ မျက်လုံးတစ်ခြမ်းပိတ်ပြီး မကြည့်စေချင်တဲ့ သဘောလောက်လေးပဲ ရှိတာပါ။ လူတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိ်ုးဟာ ဒွန်တွဲနေတာပဲလေ။ တစ်ယောက်မကောင်းတာကို တစ်ယောက်က အပြစ်တင်ပြီး ကိုယ့်မျက်ချေး ကိုယ်မမြင်တာမျိုးနဲ့ ရှုတ်ချဝေဖန် ပြောဆိုနေတာထက် နားလည်မှု ကိုယ်ချင်းစာမှုတွေနဲ့ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ဖေးမနားလည်ပေးကြမယ် ဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလေးကို တွေးမိလိုက်လို့ ဒီလိုဟာတွေ လျှောက်ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
မီးသော်ကြီး ကိုယ်တိုင်က မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လေတော့ မိန်းကလေးအတွက် ရေးရာမှာ အနည်းငယ် ဦးစားပေးမိသလို ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကိုလည်း သူငယ်ချင်းက မြင့်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ နားလည်ပေးလိုက်ဦးလို့နော် ...။ မီးသော်ကြီးလည်း ရေးသာရေးတာ ဘာတွေမှန်းလည်းတော့ သေချာမသိဘူး ...။ သေချာတာကတော့ မီးသော်ကြီးက သပွတ်အူကို ဖြေရှင်းပြီး သေချာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ ခက်တာက သပွတ်အူက အစရှာမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ခက်တယ်နော် ...။ သပွတ်အူကလည်း ဘာလို့ အဲလောက်ရှုပ်နေပြီး မီးသော်ကြီးကလည်း ဘာလို့များ အဲသပွတ်အူကိုမှ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် သွားပြီး ယူကြည့်မိရသလည်း ...။ ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာရော ဘာလို့များ ရှင်းပေးချင်ရတာလည်း မသိဘူးနော် ...။ - ။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 7:51:00 AM3comments
အော် ... ဘလော့ဘလော့ ... တည်တုန်းက တည်ထားပြီး မှန်မှန်က မရေးဖြစ် ... မရေးတော့ဘူး ဆိုလား ဆိုတော့လည်း မစွန့်လွှတ်နိုင် ဒီလိုနဲ့ပဲ ... ဖတ်ရတဲ့ သူကလည်း ပျင်း ရေးရတဲ့ သူကလည်း အဖြစ်မရှိ။ ဟုတ်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်းလေ မရေးပဲတော့ မနေနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့လည်း ရောက်တတ်ရာရာ ... ဟိုတွေး ဒီတွေးတွေကို လျှောက်ရေးလိုက်မယ်။
အတွေးနံပါတ် (၁) - ဆန့်ကျင်သည်ဟု မဆိုသာသော ... ဆန့်ကျင်သည့် အတွေးများ
မီးသော်ကြီးလည်း ဘလော့နားကို မကပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အာဝါဟ၊ ၀ိဝါဟတွေနဲ့ လုံးခြာလည် လိုက်နေတာနဲ့တင် သနားစရာ ဘလော့လေးကို လှည့်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒါကလည်း ကြုံလို့ ပြောလိုက်တာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ အတော်များများကိုလည်း မပြောဖြစ်လိုက်ဘူး။ အားလည်းနာတယ် ခင်လည်းခင်တယ်။ အဲကြောင့် အခုတော့ လမ်းကြုံနေတာနဲ့ ထည့်ပြောလိုက်တာ။ မပြောမပြီး မတီးမမြည် ဆိုသလိုပေါ့။ အင်း မြန်မာ စကားပုံတွေကလည်း ပြောသာပြောရတာ သေချာလည်း နားမလည်။ သူတို့ကလည်း အမျိူးမျိုးပဲ။ ဘာတဲ့ ချစ်ခြင်းအစ မျက်လုံးကတဲ့။ ပြီးလည်းပြီးရော နောက်တစ်မျိုးက အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဘူးတဲ့။ ရှိပါသေးတယ် တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်၊ သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း။ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖေါ် မသူတော်၊ မပြောမပြီး မတီးမမြည်။ အင်း ရှုပ်ယှက်ကို ခတ်နေတာပဲ။ အဲလိုတွေ လျှောက်တွေးနေတာနဲ့ မီးသော်ကြီးလည်း လူ့ကန့်လန့်ကြီးကို ဖြစ်နေတော့တာ။
အတွေးနံပါတ် ( ၂ ) - ဆိုင်တယ်လို့ မတွေးမိဘူးလား သူငယ်ချင်းရေ
လူ့ကန့်လန့် ဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ခု တွေးမိသွားပြန်ရော။ သိတယ်မလား။ လူ့စိတ်က မျောက်စိတ်ပါ ဆိုနေ။ တွေးမိတဲ့ နောက်တစ်ခုက မီးသော်ကြီး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပြောနေကြ စကားတစ်ခုပါ။ သူ အမြဲပြောလေ့ ရှိတယ်။ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး ဘုန်းကြီးနဲ့ဘီး အပျိုကြီးနဲ့ စွပ်ကျယ်တဲ့။ မီးသော်ကြီးက ဘာမှတော့ ပြန်မပြော ဖြစ်ပါဘူး။ တွေးတော့ တွေးမိလိုက်တယ်။ ဘာကိစ္စ မဆိုင်ရမလဲ။ သိပ်ဆိုင်တာပေါ့လို့။ ဘုန်ကြီးနဲ့ဘီး မဆိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။ ကျောယားတဲ့ အခါမျိုးမှာပေါ့ . မယားလို့ ခေါ်တဲ့ ကုတ်တံလေး မရှိခဲ့ရင် ဘီးနဲ့ လက်မမှီတဲ့ နေရာမျိုးကို ကုတ်လို့ရတယ်။ လူဆိုတာ ဆန္ဒတစ်ခုရှိရင် ဖြေဖျောက်လိုက်ရမှ နေလို့ထိုင်လို့ အဆင်ပြေတာမလား။ အဲအချိန်မျိုးမှာ လက်နဲ့လည်း မမှီဘူး ဖြစ်နေချိန် ဆိုပါတော့။ ဘီးတစ်ချောင်းသာ အနားမှာ ရှိခဲ့ရင် ဘုန်းကြီးနဲ့ဘီးဟာလည်း ဆိုင်တတ်ပါတယ်လို့။ အဲ နောက်တစ်ခုက အပျိုကြီးနဲ့ စွပ်ကျယ်။ အဲတာကမှ ပိုလို့တောင် ဆိုင်သေးတယ်။ ဘယ်လို ဆိုင်လည်းဆိုရင် မြန်မာပြည်က မိန်းကလေး အတော်များများကပေါ့ အချို့လည်း မပါဘူးထင်တာပဲ။ အများစုကတော့ သုံးကြပါတယ်။ စွပ်ကျယ်နဲ့ တို့ဖတ် ခေါ်မလား သနပ်ခါး လူးပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ရိုက်ကြတယ်လေ။ အဲမှာကို ဆိုင်နေပြီ။ သားအမိ ၂ ယောက်ပဲ ရှိကြတယ် . အမေကြီးက အိုနေပြီ သမီးကလည်း အပျိုကြီး အသက်က ကြီးနေပြီ။ အိမ်မှာလည်း ယောက်ျားသားက မရှိ။ အဲလိုချိန်မှာ ငယ်ကတည်းက အကျင့်ပါလာတဲ့ တို့ဖတ်ရိုက်တဲ့ စွပ်ကျယ်ကလည်း မရှိတော့ရင်။ အဲအပျိုကြီးဟာ ဈေးမှာ စွပ်ကျယ်ကို သူကိုယ်တိုင် ၀ယ်ရမှာ။ သူပြောနေကြ မဆိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားက သေချာပဲတွေးတွေး အားနေလို့ပဲတွေးတွေး ဆိုင်ကိုဆိုင်နေတာနော်။ ဟုတ်တယ်မလား။ ကဲ အဲဒီတော့ … မီးတော်ကြီး ဒုတိယံမ္မိ လူ့ကန်လန့်ကြီး ဖြစ်သွားပြန်ပါလေရော။
အတွေးနံပါတ် ( ၃ ) - လိပ်ပြာနဲ့ ခူယားက အမွှာတွေပါ
အင်း ... ခူယား အချို့ကတော့ ပိုးယားလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ခူယား ဆိုတာနဲ့ ရွံသလိုလို၊ ကြောက်သလိုလို၊ မသတီသလိုလိုနဲ့ လိုလိုပေါင်းများစွာနဲ့ လူတွေရဲ့ အတွေးကိုယ်စီမှာ ဖြစ်တတ်လေ့ ရှိကြပြီး ဝေးရာရှောင်ကြတဲ့သူ ရှိသလို၊ သတ်ပစ်တဲ့သူ၊ တစ်နေရာရာသို့ လွှင့်ပစ်လိုက်သူတွေကြီးပါပဲ ...။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ ခူကောင်လေးပါလို့ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ပြောကြလိမ့်မယ်တော့ မီးသော်ကြီး မထင်ပါဘူး။ အဲလိုနဲ့ ခူကောင်လေး ဘ၀ကနေ သူများတွေ သိပ်သတိမထားမိတဲ့ ပိုးတုန်းလုံးကောင်လေးမှတဆင့် လိပ်ပြာလေးဘ၀လည်း ရောက်သွားရော ...။ အားပါးးးး ပြောင်းလဲသွားလိုက်ကြတဲ့ လူတွေ။ လှလိုက်တဲ့ လိပ်ပြာလေးလို့။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ထားလိုက်တဲ့ သူတို့။ ပန်းနဲ့လိပ်ပြာ ဆိုပြီး စာဖွဲ့ကြသူတို့။ ရှိပါသေးတယ် လိပ်ပြာတွေသာ မရှိရင် ကမ္ဘာကြီးတောင် ပျက်စီးသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အပြောနဲ့ ပြောကြတဲ့သူတွေ။ အဲလို ပြောကြတဲ့ သူတွေ အားလုံးနီးပါးက လိပ်ပြာမဖြစ်ခင် ခူကောင် ဘ၀ကာလတုန်းမှာ ချစ်တတ်ခဲ့ကြရဲ့လား။ တကယ်ဆို မျှတကြရဲ့လားဆိုတာ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ သူပဲပေါ့။ ဒါကိုတော့ ပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ။ ပြောမရဘူး ဆိုပေမယ့်လည်း ပြောလိုက်ပါဦးမယ် လိပ်ပြာတွေကို ချစ်တတ်ရင် ခူကောင် ဆိုတာကိုလည်း ကြင်နာကြည့်ပေးကြပါလို့။ ခူကောင်တွေ ရှင်သန်ပါမှ လှပါတယ်ဆိုတဲ့ လိပ်ပြာတွေဟာ များပြားစွာ အသက်ရှင်နိုင်ကြမှာလေ။ သိတယ်မလား။ ကန့်လန့်ကြီးပါဆိုနေ ... အဲဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ ...။ မီးသော်ကြီးက တတိယံမိ လူ့ကန့်လန့်ကြီး ဖြစ်သွားပြန်ပါလေရောပေါ့။
အင်း ... အဲလိုနဲ့ အချိန်တွေက အားနေရော ... အားနေတာနဲ့ တွေးလိုက်ရော။ တွေးလိုက်တာနဲ့ ကန့်လန့်ဖြစ်ကုန်ရော။ မီးသော်ကြီးလည်း စိတ်တွေက ကန့်လန့်ဖြစ်ပါများပြီး တော်ကြာ ကဏန်းကောင်တွေလို ဘေးတိုက်ကြီး လမ်းလျှောက် ဖြစ်နေဦးမယ် ဆိုပြီး အတွေးတွေကို လျှော့လျှော့ထားလိုက်ပါတယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ သူငယ်ချင်းရယ် တွေးကြည့်ပါ မီးသော်ကြီး လမ်းလျှောက်တာ သူများတွေလို မဟုတ်ပဲ ကဏန်းတစ်ကောင်လို ဘေးတိုက်ကြီး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကြည့်ရတာ လှလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း ဆိုတာများနော်။ အဟား။ ( သေချာ တွေးကြည့်လိုက်နော် မမေ့စေနဲ့ )။ ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ ... သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဘယ်သူ့မှတော့ ပြန်မပြောနဲ့ပေါ့နော်။ လျှို့ဝှက်ချက်ရယ်လို့ မဟုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ပြောပြမယ်သိလား။ အဲတာကလေ။ အတွေးတွေကို လျှော့ထားလိုက်တယ် ဆိုပေမယ့်လို့ လူမသိသူမသိ တိတ်တိတ်လေး စိတ်ကူးထဲမှာ ဆက်ပြီး အတွေးတွေ ကန့်လန့်တိုက်နေတုန်းပဲ ဆိုတာကိုပေါ့။ အဟိ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောရဘူးနော်။ သူငယ်ချင်းတို့ပဲ သိပါစေ။ ဟုတ်ပြီနော်။ ယုံကြည်နေမယ် သိလား ။ - ။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 9:32:00 AM 1 comments
အဟုတ်ပဲ ... ဘလော့ကို လုံးဝ လှည့်မကြည့်ဖြစ်တာမှ … အတော်ဆိုးနေပါလားနော် ... ခုတော့လည်း ခြောက်ကပ်နေတာပဲ … ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ လှည့်မကြည့်မှတော့လည်း … အင်းလေ ... ဖြစ်သင့်ပါတယ်လေ။ ရေးချင်စိတ်လည်းပျောက် ... လူလည်း ဂေါက်နေတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရပါ့မလဲပဲ။ ရေးဖြစ်တယ် စိတ်ထဲမှာ အမြဲရေးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ပေါ်မှာ ချမပြဖြစ်တာ။ မီးသော်က စိတ်ထဲရှိတာ ရေးတာဆိုတော့လေ။ စိတ်ညစ်နေတာနဲ့ ကြုံရင် စိတ်ညစ်တာပဲ ရေးမိမယ်။ အဲတော့ မဖြစ်ဘူးလေ။ လာရောက် လည်ပတ်သူတွေကို အားနာရမယ်ဟုတ်။ ပထမတုန်းကတော့ ဒိုင်ယာရီ သဘောမျိုးနဲ့ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ရေးချင်တာလေးတွေ ရေးမယ်ပေါ့ တွေးလိုက်တာ။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက လင့်ချိတ်ပေးထားတော့လေ ရေးချင်တာတွေ ရေးလိုက်ရင် လာဖတ်တဲ့သူတွေကို အားနာစရာကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်။ မီးတော်ကြီး စိတ်တွေ ဂယောင်ချောက်ခြား ဖြစ်နေလို့လေ ... အဲကြောင့် မရေးတာ။ ဒီမနက် တွေးမိတယ် စာတော့ ရေးလိုက်ပါဦးမယ်လေ လို့ပေါ့။ ခုတော့လည်း စိတ်တွေက အဆင်မပြေဘူး။ ရေးမှာလည်း ၀ါးတားတားနဲ့။
အမှန်က မျက်နှာသစ်တုန်းက တွေးမိသွားတာ။ အကောင်လေး တစ်ကောင် ရေထဲမှာ ကျနေတာ တွေ့တာကနေ စတာပဲ။ ပုရွက်ဆိတ်လို အကောင်လေးပဲ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းကြီးတယ်။ အတောင်ပံ ပါတယ်။ အဲအကောင်လေးကလေ ရေထဲမှာ ယက်ကန်ယက်ကန် ဖြစ်နေတာ။ သော်လည်း မျက်နှာမသစ်ခင် ကြည့်မိလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ အော် ... သူ့ခမျာ သေရေးကနေ ရှင်ရေးပြောင်းဖို့ အတော် ကြိုးစားနေရှာတာ။ သော်လည်း သူ့ကို ကူပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရှင်ရေးကြိုးစားမှူကို။ မှန်တာပြောရင် ကိုယ်ကျိုးအတွက် တွေးလိုက်မိပါတယ်။ တကယ်ပါ။ ဖြူစင်တဲ့ ကယ်တင်မှုတော့ မဟုတ်ပါဘူးပဲ။ မီးသော်လည်း ရေမကူုးတတ်ဘူးလေ။ အကယ်၍ ရေကြောင်းခရီး သွားဖြစ်ခဲ့လို့များ ဤသို့ဖြစ်လာလျှင် ဆိုပြီး ကယ်တင်လိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲလို တွေးလိုက်ပေမယ့် ဆယ်ယူလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ရှင်စေချင်တဲ့စေတနာက အပြည့်ပါ။ အဲအကောင်လေးက ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ လတ်တလော အခြေအနေမှာတော့ သူရှင်သန်ဖို့ပဲ တွေးမိပါတယ်။
မနေ့ညကလည်း အိမ်နောက်ဖေးကို ဆင်းတဲ့ လှေကားလေးနားမှာ မြွေလေး သေးသေးလေး တစ်ကောင်။ သူက လူသံကြားလို့ထင်ပါရဲ့ ငြိမ်နေတယ်။ သူ့ရဲ့အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်တာလည်း ဖြစ်သလို သူများကို အန္တရာယ်ပေးဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်ဆုံး ထင်မိတာကတော့ သူ့အတွက် ကာကွယ်ဖို့ ငြိမ်နေတာပါလေ။ ဘာလို့လဲဆို အဲမြွေလေးက အကောင်ပေါက်လေး။ တီကောင်ထက် နည်းနည်းလေးပဲ ကြီးတယ်လေ။ တုတ်လေးနဲ့ ထိကြည့်လိုက်မှ မြွေသွားသလို ပြေးသွားတော့မှပဲ မြွေလေးမှန်းသိတာ။ မီးသော် သူ့ကို နည်းနည်းခြောက်လှန့်ပြီး လွတ်ရာကို ပြေးစေလိုက်တယ်လေ။ သူလည်း သူ့အတွက် သေရေးကနေ ရှင်ရေးကို ကူးပြောင်းရတာ ဆိုတော့ မြန်ပါတယ် ပြေးသွားလိုက်တာ။ ကြီးလာရင် အန္တရာယ်ရှိမှန်း သိပေမယ့် လတ်တလော အခြေအနေမှာတော့ သူ့ကို ရှင်သန်စေချင်တဲ့ စိတ်လေးပဲရှိပါတယ်။
အဲလိုပဲ အလားတူ တိုက်ဆိုင်မှုခေါ်မလားတော့ မသိဘူး။ မီးသော်ကြီးလေ ကြီးလာရင် အန္တရာယ်ရှိမှန်း သိပေမယ့် ရှင်သန်ခွင့် ပေးမိခဲ့တယ်။ မှန်တာပြောရရင် သူက အဆိပ်ရှိတယ် ဆိုတာ သိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လေ လတ်တလော အခြေအနေမှာ သူ့ကို ရှင်သန်စေချင်တယ်။ မီးသော်ကြီးရဲ့ မပြတ်သားတဲ့ စိတ်တွေကြောင့်ပဲ ဆိုပါတော့။ ပုရွက်ဆိတ်လို အကောင်လေး ရေထဲမှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့ရင် ...။ မြွေတစ်ကောင်ပဲဆိုပြီး သတ်ပစ်လိုက်ရင် ...။ အချစ်ကိုလည်း ဘာမို့လို့လည်း ဆိုပြီး လုံးဝ ဥပေက္ခာ ပြုလိုက်နိုင်ခဲ့ရင် ...။
နောက်ဆုံးတော့ တွေးမိပါတယ်လေ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပဲ ဆိုပါတော့။ ပုရွက်ဆိတ်လို အကောင်လေးကိုလည်း မသေစေချင်ခဲ့ဘူး။ မြွေပေါက်စလေးကိုလည်း မသတ်ရက်ခဲ့ဘူး။ အဲလိုပဲ အချစ်ကိုလည်း ဥပက္ခော မပြုနိုင်ခဲ့လေတော့ ...။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 8:46:00 PM 1 comments
မီးသော်ကြီး စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ကြားထဲကနေ စာရွက်လေး ၂ ရွက် ထွက်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက လပြည့်ညရဲ့ ခံစားမှူလေးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ မီးသော်ကြီးလည်း အဲလို စာရွက်ပိုင်းစလေးတွေနဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ရေးထားတာတွေ စည်းကမ်းရှိစွာ အသိမ်းကောင်းမှုကြောင့် ဘယ်တွေ ရောက်ကုန်တယ်တော့ မသိဘူး။ ခု ဒီစာရွက်လေးတွေတောင် ကံဆိုးလို့ မီးသော်ကြီးက လာတွေ့နေသေးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်သွားအောင် မီးသော်ကြီးရဲ့ ဘလော့လေးမှာ တင်လိုက်မယ်နော်။ မူရင်းကိုပဲ စကမ်တင်ပြီး တင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်စောင်က ၀ါးနေတယ်။ မိတ္တူကူးပြီးမှ တင်လိုက်တာမို့လို့လေ ... သူ့မူရင်းအတိုင်းဆို စာရွက်က ကြီးနေတော့ စကမ်တင်ရတာ အဆင်မပြေလို့ နည်းနည်းသေးအောင် မိတ္တူဆွဲလိုက်တာ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်မသိ ၀ါးနေရော။ အဲကြောင့် စာနဲ့လည်း သပ်သပ်ရေးပေးထားတယ်နော်။ မီးသော်ကြီးဆိုတာ အဲချိန်ထဲကနေ အဲမတိုင်ခင်ချိန်ထဲကနေ အဲလိုပေါခဲ့တယ် ဆိုတာ သက်သေပြသလိုပဲပေါ့နော်။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး အမှတ်တရလေးပါ။
လ ... အရမ်းသာတယ်။ လ ... သာတာကို ကြည့်ရင်းနဲ့ တစ်ခုခုကို ခံစားကြည့်ချင်တယ်။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ လောကကြီးဟာ လရောင်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်နေတယ်။ သူက ( လောကကြီးက ) အလိုက်သိစွာနဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်လေ။ အခုချိန်မှာ သဘာဝလောကကြီးက အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းနေတယ်။ လပြည့်ညရဲ့ နိဂုံးဆိုတာ လကွယ်ညရဲ့ နိဒါန်းတစ်ခုပဲ။ အခုချိန်မှာ ( လပြည့်ညမှာ ) အရမ်း လှပနေတဲ့ လောကကြီးက လကွယ်ည အခုချိန်ဆိုရင် မှောင်မိုက်ခြင်းအတိပြီးစွာနဲ့ ကြောက်စရာ သတ္တ၀ါဆိုးတစ်ကောင်နဲ့ အရမ်းကို တူနေလိမ့်မယ်။ အခုလို သာယာလှပနေတဲ့ ညတစ်ညမှာ ချစ်သူ ( ချစ်ရတဲ့သူ ) နှစ်ဦး ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် အရမ်းကို ကြည်နူးစရာကောင်းမှာပဲ။ လသာတဲ့ညမှာ လရောင်လှုံရင်းနဲ့ နှစ်ယောက်အတူ လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အရမ်းကိုသာယာနေတဲ့ လမင်းကြီးကို နှစ်ယောက်အတူ ကြည့်ရင်းနဲ့ တူညီတဲ့ ရင်ခုန်သံကို ခံစားမယ်ဆိုရင် အခုလို ပျင်းရိငြီးငွေ့စွာနဲ့ တစ်ဦးတည်းသာနေတဲ့ လမင်းကို အဖေါ်ပြုပေးရင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် ခြောက်သွေ့အထီးကျန်နေတဲ့ လောကကြီးကို သာယာစိုပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ လကွယ်ည ရောက်ခဲ့ရင်လည်း အနားမှာ အားကိုးစရာ ချစ်သူရှိနေတော့ ကြောက်စရာ မကောင်းတော့ဘူးပေါ့။ ( ခံစားကြည့်ချင်တယ် ) ကောင်းကင်မှာ သာနေတဲ့ လမင်းကြီးရေ နင်တစ်ဦးတည်း ဖြစ်နေလို့ ပျင်းများနေမလားပဲ။ တစ်ကယ်တော့ လဆိုတာ ကမ္ဘာရဲ့ အရံဂြိုလ် တစ်လုံးပဲလို့ သိပ္ပံပညာရှင် သုတေသီတွေက ပြောတယ်။ ငါ့အမြင်မှာတော့ ဆန်ဖွပ်နေတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက်နဲ့ ပြန့်ကျဲပြီး လွင့်စင်လာမယ့် ဆန်စေ့လေးတွေကို မျှော်လင့်နေတဲ့ ယုန်လေးတစ်ကောင်ကို ခြံခတ်ပေးထားတာနဲ့ တူတယ်လို့ မြင်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖိုးလမင်းကြီးဆီကနေ ထမင်းဆီဆမ်း ရွှေလင်ပန်းနဲ့ပေးဖို့ တောင်းခဲ့ဘူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖိုးကြီး ( ဆန်ဖွပ်တဲ့ အဖိုးကြီး ) က အရမ်း အိုနေပြီထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဖွပ်နေတဲ့ ဆန်က အခုထက်ထိတိုင် ထမင်း ဖြစ်မလာသေးဘူးလေ။ သူဖွပ်နေတဲ့ စပါးတွေကိုကနေ ဆန် မဖြစ်သေးတာ ထင်တယ်နော်။ ငါမျှော်လင့်စွာနဲ့ လပြည့်ညတိုင်း ကြည့်မိတယ်။ ဒီနေ့ညထိ သူ ဆန်ဖွပ်နေတုန်းပဲလေ။ ဒါတွေထားလိုက်ပါ။ အေးမြတဲ့ လရောင်ကို ခံစားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနားမှာ အဖေါ်မရှိတော့ ခံစားမှုက မပြည့်စုံတာရယ် ပိုပြီးပြင်းထန်တာရယ် ရောနေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ လသာတဲ့လပြည့်ညမှာ သာနေတဲ့ လမင်းကြီးရဲ့ အေးမြတဲ့ အလင်းရောင်ကို ခံစားရင်းနဲ့ ဘယ်ချိန်မှာများ ရွှေလင်ပန်းနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ထမင်းဆီဆမ်း ရောက်လာမလဲဆိုတာ မျှော်လင့်နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်နော် ... ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
၀ါဆိုလပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ည ၁၂နာရီ တိတိ
မနှစ်တုန်းကလည်း ၀ါဆိုလပြည့်နေ့မှာ စာတစ်စောင်ရေးဖြစ်တယ်။ ခပ်ကြောင်ကြောင် စာတစ်စောင်ပါ။ အဲဒါ - ဒီနေ့ရောက်တော့ သတိရမိတာနဲ့ နောက်တစ်စောင် ထပ်ရေးမိသွားတာ။ မနှစ်တုန်းက ဒီအချိန်မှာ တွေးမိတဲ့ အတွေးက ဒီနှစ်တွေးမိတာနဲ့ မတူဘူး။ မနှစ်တုန်းက လသာတာကိုကြည့်ပြီး ခံစားမိတယ်။ ဒီနှစ်က မနက်ဖြန် ဈေးနေ့မှာ ပိတ်စသွားဝယ်ပြီး စကတ် တစ်ထည် ချုပ်ဝတ်မယ်လို့ တွေးထားမိတယ်။ ဈေးလည်း လယ်မယ်ပေါ့။ နောင်နှစ် ဒီအချိန်မှာရော ဘာတွေများ တွေးမိဦးမလည်း မသိဘူး။ တစ်နှစ် ဆိုတာ ခဏလေးနဲ့ ကုန်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေက အများကြီး - ပျော်ရွှင်စရာတွေ၊ ၀မ်းနည်းစရာတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေ - ဘာတွေဟာ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လို ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ မမှတ်မိပေမယ့် ဖြစ်ခဲ့တာတွေ အားလုံးကို သိနေခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မှစပြီး နောင်နှစ်အချိန်အထိ အတွင်းမှာရော ဘာတွေဖြစ်ပြီး ဘာတွေကြုံဆုံရဦးမှာလဲ။ အင် … တစ်နှစ်အတွင်းမှာရော၊ အရင်တုန်းကနှစ်တွေမှာရော၊ အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာရော မပြောင်းလဲပဲ တူညီတာ တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါက လထဲက အဖိုးအိုက ဆန်ဖွပ်နေပြီး ယုန်ကလေးက မျှော်နေတာပဲ။ အဖိုးအိုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ယုန်ကလေးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်။ ငါကရော နောင်လာမယ့် နှစ်တွေမှာ ဘာတွေကိုများ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမလဲ မသိဘူး။ အိပ်တော့မယ်။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 9:40:00 AM2comments
ခုတစ်လော မီးသော်ကြီး အရှုပ်တွေ လုပ်နေပြီး အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့ မီးသော်ကြီးရဲ့ ခြောက်ကပ်ကပ် ဘလော့လေးဘက်ကို ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီနေ့တော့ မီးသော်ကြီးတော့ အတော်လေး လန်းနေတာနဲ့ စာတွေက မရေးချင်ပါဘူးလို့ ဆိုတာတောင်မှ တန်းစီနေတယ်။ အဲတာကို ခဏလေးနေမှ ရေးမယ်လို့ လုပ်ကြည့် ကောက်တော်မူကြပြီး တကယ်ရေးမယ်လည်းဆိုရော လုံးဝ လှည့်ကြည့်ကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အဲတော့သူတို့ကို ချော့ပေါင်းနေရတယ်။ အဲလိုမှ ချော့မပေါင်းလည်း မဖြစ်ဘူး။ ရေသည်မမဆိုတဲ့ မီးသော်ကြီးက စပ်စပ်ဆော့ဆော့နဲ့ ဘလော့ ဆိုတာကြီးကို သွားလက်ဆော့ထားလေတော့။ ကဲ ... ရေးပေဦးတော့၊ ချော့ပေဦးတော့ပေါ့နော့်။
ဒီနေ့ မီးသော်ကြီး အိပ်ရာထတော့ ရှမ်းပြည်ရာသီဥတုကလည်း တောင်ပေါ်ဒေသ ဆိုတော့ အရမ်းကြီး မပူပေမယ့်လို့ နွေဦးရောက်နေပြီ ဆိုတာကိုတော့ သိသာအောင် ပြနေတယ်လေ။ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း နည်းနည်းလေး ပူစပ်စပ် ဖြစ်နေတာနဲ့ ရေချိုးလိုက်တယ်။ ပြောလို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး ။ ခု သိပ်မပူသေးဘူး။ မန်းလေးက အသိတစ်ယောက် လာလည်တာ အေးလို့တဲ့ အနွေးထည် ၀တ်ထားသေးတယ်။ အင်း ... စာက ရေးမယ်မှ မကြံသေးဘူး နွေးဦးလေရူးလိုပဲ … ဟိုဝေ့ ဒီပတ်နဲ့။ နွေဦးလေရူး ... ဟုတ်ပါတယ်။ လေတွေ အတော်တိုက်နေတယ်။ ဦးတည်ရာလည်း မရှိဘူး။ ရွက်ဝါလေးတွေကလည်း လေရူးနဲ့အတူ တ၀ဲဝဲ လွင့်လို့ပေါ့။ ရာသီဥတုကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကို သာယာနေတယ်။ လေရူးဝေ့တာ ရွက်ဝါကြွေတာတွေကို ကြည်နူးနေလို့ မဖြစ်ဘူး။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကလည်း တခါတည်း တွဲလိုက်လာတာ။ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ နားစွင့်ပြီး နေရမယ့်နေ့ရက်တွေကို ရောက်လာပြီလို့ သတိပေးနေသလိုပါပဲလေ။ ဒါပေမယ့်လေ အရမ်း သာယာနေတာတော့ အမှန်ပဲ။ မီးသော်ကြီးရဲ့ အမြင်တွေ လန်းနေလို့ပဲလားတော့မသိ။ (ဟာဟ)
စာတွေက လိုရင်းကနေ သွေဖယ်သွားတယ်။ ၂၃.၅ ဒီဂရီ တိမ်းစေါင်းနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာပဲ နေလို့လားတော့ မသိဘူး။ အမြင်တွေကလည်း စောင်းတတ်သလို ခု မီးသော်ကြီးရေးတဲ့ စာကလည်း တိမ်းစောင်းပြီး လိုရင်းကနေ သွေဖယ်သလိုလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကြုံလို့ ပြောလိုက်ဦးမယ် ဖတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းလည်း စောင်းစောင်းကြီး မဖတ်နဲ့နော်။ တော်ကြာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်သဘောပဲကွာ ဘယ်လိုဖတ်ဖတ် ဆိုပြီး စောင်းစောင်းကြီး ဖတ်နေရင် ကိုယ်နဲ့ လုံးဝမဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတာကို အရမ်းကို ဆိုင်ချင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အိုးရွဲ့ကို စလောင်းရွဲ့နဲ့ ဖုံးနေတယ်လို့ ပြောဦးမယ်။
ကဲပါ ဘယ်တွေ ရောက်ရောက်ကုန်လည်း မသိဘူး။ မီးသော်ကြီး ရေးချင်တာကို ပြန်သွားမှ ...။ မီးသော်ကြီးက ရေချိုးပြီး သနပ်ခါးလိမ်းတာကို စာစီမလို့ဟာ ဘာတွေ ဘယ်လို ရောက်ကုန်လည်းကို မသိတော့ဘူး။
ဟုတ်တယ် ဒီနေ့ မီးသော်ကြီး ရေချိုးပြီးတော့ တစ်ဆောင်းတွင်းလုံး စွန့်ခွာထားတဲ့ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ပြန်ဆုံတယ်။ အဲသနပ်ခါးကို မီးသော်ကြီး ဆောင်းဝင်ပါပြီ ဆိုကတည်းက လုံးဝကို လှည့်မကြည့်တော့တာ။ ကြည့်လို့လည်း မဖြစ်ဘူး။ ဒီလောက်အေးတာ ... သနပ်ခါး လိမ်းလိုက်ရင် မျက်နှာတွေ တင်းပြီး အသားတွေ အက်ကုန်မယ်။ အဲတော့လည်းလေ အားနာနာနဲ့ လှည့်ကို မကြည့်ဖြစ်ဘူး ဆိုပါတော့။ ဒီမနက်တော့ ရေချိုးပြီးတော့ ရာသီဥတုကြောင့် ပူစပ်စပ် ဖြစ်နေတာနဲ့ သနပ်ခါးလေးဆီကို ခြေဦးပြန်လှည့်လိုက်တာ။ အိုး ... အိုး ... အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလိုပဲ။ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာ သိလား။ ( ဘယ်ဟာကို ပြောတာလဲတော့ လာမမေးနဲ့နော် )။ သူ့ကို အချိန်အတန်အကြာ ပစ်ထားတာတောင်မှ သူ့ဘက်က သစ္စာရှိရှိနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေးလေးနဲ့ ပြန်ကြိုဆိုတယ်။ ရေချိုးပြီး သနပ်ခါးလေး သွေးပြီး မျက်နှာပေါ် တင်လိုက်တာ။ အားပါး ... အေးအေးလေးနဲ့ မွှေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း။ သူလေးက အဲလို ချစ်ဖို့ကောင်းတာလေ။ မီးသော်ကြီးလည်း ဒီနေ့မှ ပြန်တွေ့ရတာဆိုတော့ များကြီးသွေးပြီး ပစ်ပစ်လေးနဲ့ ဘဲကြား ရိုက်ပလိုက်တယ်။ ချစ်တဲ့သူက ကြည့်ရင် ( ... ဘဲကြားလေးနဲ့ ထူထူ ... အသားထ်ိအောင် နေမခသူ ) ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ဆိုမိမယ်။ မနာလိုတဲ့သူ ကြည့်ရင်တော့ ပဲဟင်းအိုးထဲ မှောက်လာသလားပေါ့။ တယ်ဂျင်းကရော ဘယ်လို ပြောမလဲနော်။ အဟိ။
သနပ်ခါးလေးကို ပစ်ပစ်နဲ့ ညက်ညက်လေး သွေးပြီးတော့ အသားထဲကို စိမ့်နေအောင် လိမ်းပြီး ပါးကွက် ထူထူလေး ကွက်လိုက်တာ။ အဟဲ ... လိမ်းပြီးတော့ မျက်နှာကြောက တင်းနေတယ်။ မီးသော်ကြီးကလေ သနပ်ခါးကို ဘာမှမပါပဲ သနပ်ခါးသက်သက် လိမ်းတာကို အရမ်းကြိုက်တာ။ များသောအားဖြင့်လည်း အဲအတိုင်းပဲ လိမ်းတယ်။ အောက်ခံမိတ်ကပ်တို့ ဘာညာတို့ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်။ မီးသော်ကြီး မိတ်ကပ်ကိုလည်း လိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခုပြောသလို လိမ်းတာကတော့ များသောအားဖြင့် အိမ်မှာ နေတဲ့ချိန်တွေ လိမ်းတာများတယ်။ မီးသော်ကြီး မျက်နှာက အဆီပြန်တယ်လေ။ သနပ်ခါးကို အဲလို လူးထားလိုက်ရင် ခဏနေ အကြော်သယ်မျက်နှာ ကြနေတာပဲ သနပ်ခါးတွေက ကွက်နေတာ။ ဘယ်လောက် လှလိုက်တဲ့ရုပ်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ တယ်ဂျင်းတို့ဘာသာ စဉ်းစားကြည့်ကြပေတော့။ တော်မ၀င်လို့ ခေါ်မတင်တာလို့တော့ မထင်ပါနဲ့နော်။ သနပ်ခါးဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ ၀ိသေသတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရတယ်။ သနပ်ခါးနဲ့ မြန်မာပြည် ရာသီဥတုကလည်း အရမ်း လိုက်ဖက်ညီတယ်။
နံနက်အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်ပြီး သနပ်ခါးလိမ်းဖို့ သွေးတယ်ဆိုရင်ပဲ အညောင်းပြေတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှူကို ရမယ်။ လက်ချောင်းလေးတွေ သန်မာမယ်။ လက်မောင်းလေးတွေ ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး ဖြစ်လာမယ်။ ခါးလေ့ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်ပြီးသားဖြစ်မယ်။ ဒါက မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝအလှကို ဖန်တီးပေးတဲ့ အချိန်ယူပြီး လုပ်စရာမလိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပေါ့။ မြန်မာပြည် အညာဘက် ဒေသတွေမှာ ရာသီဥတုက အရမ်းပူတော့ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ အလှအပအတွက်တင်မကဘူး အပူဒဏ်ပါ ခံနိုင်ဖို့အရေး သနပ်ခါးလေးကို လိမ်းလိုက်ပါမှ နေရထိုင်ရတာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တယ်။ မောနေတဲ့အချိန် သနပ်ခါးနံ့လေး ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အမောလေးကိုပြေလို့ ရင်လေးကို အေးသွားတာ။ သနပ်ခါးလေးမှာ ချွေးလေးတွေ စို့နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာဟာ မလှခဲ့ရင်တောင်မှ အတော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ ဒီနေ့မီးသော်ကြီးရဲ့ မျက်နှာလိုပေါ့။ အဟီး ... ကြော်ညာဝင်ကြည့်တာ။
ဟုတ်ကဲ့ ... ဒီနေ့လေ မီးသော်ကြီးတစ်ယောက် ၃ လတာမျှ ခွဲခွာနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးနဲ့ ပြန်ဆုံတဲ့နေ့ပါ။ အေးအေး မွှေးမွှေးလေးနဲ့ နေလို့ကောင်းလိုက်တာ။ လေရူးလေပွေတွေကလည်း ဟိုဝေ့ဒီဝေ့နဲ့။ ရွက်ဝါလေးတွေကလည်း လေနဲ့အတူ ပျံဝဲလို့။ တစ်ချက်တစ်ချက် ဥသြလေးကလည်း တေးလေးကိုသီကျူးလို့။ လေတစ်ချက်တစ်ချက် အဝေ့မှာ သနပ်ခါးရနံ့လေးကလည်း သင်းလို့။ အတော်ပြည့်စုံပြီး သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲ။ - ။
မှတ်မှတ်ရရ ( ၁၆.၃.၂၀၀၇ ) နေ့ပါ။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 7:51:00 AM 1 comments
မီးသော်ကြီး ပို့စ်အသစ် တင်လိုဇောနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာ ပေါက်တတ်ကရတွေ စာစီပါတော့မယ်။ အားလုံးသော ဘလော့လာ ပရိတ်သတ်များကို ကျွန်မ မီးသော်ကြီးက ထိုသို့ပုံစံဖြင့်၎င်း၊ ဤသို့ပုံစံဖြင့်၎င်း ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်စွာနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာတွေကို ဖတ်ရှူမငြီးရလေအောင် တင်ဆက် ရေးသားပါတော့မည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ အခုလို အများသူငါ မြင်တဲ့အတိုင်း ပေါပြီးသကာလ မီးသော်ကြီးမှာဖြင့် ဘာရေးလို့ ရေးရမယ်ဆိုတာ မယ်မယ်ရရ မတွေးရသေးပါဘူး။ မတွေးရသေးလည်း ရေးချင်တာရေးမယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒန်တန့်တန် ...
မီးသော်ကြီးကလေ လုပ်ချင်ရာကို လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်က မသိစိတ်မှာလား သိစိတ်မှာလားမသိ အမြဲတော့ရှိနေတယ်။ ၀ါသနာနဲ့ ဗီဇဆိုတာ ဖျောက်ရခက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ။ မီးသော်ကြီးရဲ့ ဗီဇပဲဆိုပါတော့ မကောင်းမှန်း သိပေမယ့် ဖျောက်လို့ လုံးဝမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါလုပ်တာ မကောင်းဘူးဆိုလည်း မီးသော်ကြီးက လုပ်ချင်ပြီဆို မကောင်းသော်ညားလည်း လုပ်ဖြစ်အောင်ကို လုပ်လိုက်ရမှ စိတ်ချမ်းသာလေ့ရှိပါတယ်။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ မီးသော်ကြီး စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်လိုက်တယ် ဆိုပေမယ့် အခြားတစ်ဘက်မှာ ဆိုးကျိုးသဘော သက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်ဘူးပါတယ်။ အဲတာကိုလည်း မီးသော်ကြီး သိသိကြီးနဲ့ ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အတ္တကြီးတာလို့ ပြောကြမယ်လည်း ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီးသော်ကြီးက ဖြစ်အောင်မှ မလုပ်လိုက်ရရင် စိတ်ထဲ တနုံ့နုံ့နဲ့ ဘယ်လိုမှ နေမပျော်တော့ပါဘူး။
ရှိပါသေးတယ်။ မီးသော်ကြီး ကြောင်တာတွေ။ နမူနာတစ်ခုကို ပြောရမယ်ဆိုရင် မီးသော်ကြီး တစ်နေ့ နေကြာစေ့ ၀ယ်စားဖြစ်တယ်။ မီးသော်ကြီး အခွံလေးတွေ ခွာပြီး စားနေရင်းနဲ့ ဟိုတစ်ချိန် ကလေးဘ၀မှာ နေကြာစေ့ကို အခွံ သေချာမခွာတတ်ပဲ အားလုံးကို စုပုံပြီး ၀ါးစားပလိုက်တာကို သွားသတိရလိုက်မိတယ်။ မီးသော်ကြီးလည်း အဲလို စားချင်စိတ်ကလည်း ချက်ခြင်းပေါက်သွားတယ်။ ဘယ်ရမလဲ ချက်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အားလုံးကို စုပုံပြီး ၀ါးစားပစ်လိုက်တာပေါ့။ မီးသော်ကြီးက အဲလိုလည်း ကြောင်တတ်ပါတယ်။ သူငယ်ပြန်တာတော့ ဟုတ်ဘူးနော်။ အဟိ။ အဲလို လုပ်ချင်တာကို ချက်ခြင်းလုပ်လိုက်ရမှ စိတ်ကျေနပ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ ပြီးတော့ မီးသော်ကြီး တစ်ခါတစ်လေလည်း ယုတ်တတ်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ - အ၀တ်တွေ လျှော်လှန်းထားတဲ့ နေ့မျိုးမှာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ အဲနေ့ဆို မီးသော်ကြီး ညနေစေါင်းတာနဲ့ ယုတ်ပါတော့တယ်။ ဟားဟား။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ ဘ၀အရေးမှာ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုဟာမျိုးတွေကြတော့ မီးသော်ကြီးတို့က ဖြစ်ချင်ပြီးရော ဆိုပြီး လုပ်တတ်တာလေးကို ချိုးနှိမ်ထားရပါတယ်။ ဒါမျိုးကတော့ မီးသော်ကြီးမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ မည်သူမဆိုပေါ့လေ။ လုပ်ချင်ပြီးရော လုပ်ခွင့်ရရင်ပြီးရော ဆိုပြီး မလုပ်သင့်ဘူးတော့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ တစ်သက်တာအရေး၊ ကိုယ့်လူမျိုးအရေး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေးလို ကိစ္စမျိုးတွေမှာတော့ လုံးဝ မလုပ်သင့်တာပါ။ အဲလို လုပ်တတ်တဲ့ သူကလည်း အဲလို အရေးတွေမှာ လုံးဝ မသက်ဆိုင်သလို နေမှသာလျှင် အရာရာကောင်းဖို့ ဖြစ်နိုင်မှာ။ လုပ်ချင်စိတ်ရှိလို့ လုပ်တယ် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို လုပ်ရပြီးရော ဆိုပြီး လုပ်တဲ့သူတွေသာ အဲလို အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် မီးသော်ကြီးဖြင့် မတွေးဝံ့တာပါပဲ။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လားဟင် ... စာဖတ်နေတဲ့ တယ်ဂျင်းရယ်။
နောက်တစ်မျိုးကြတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ အချစ်ရေးမှာ ဆိုကြပါစို့။ ကိုယ်ကလည်း ချစ်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုလည်း ချစ်တယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ညီမျှနေပါလျက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေ ငဲ့ကွက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သေချာအောင် မချနိုင်ဘူး ဆိုရင်။ မီးသော်ကြီးထင်တယ်။ ဒါမျိုးကြတော့ ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာ ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့လေ။ အသက် ငယ်နေတာတွေ၊ ကြီးနေတာတွေ။ ဥစ္စာဓန အဆင်မပြေတာတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံကုံလုံမှု မရှိတာတွေ ဒါတွေကို ငဲ့နေပြီး သဘာဝတရားကို လွန်ဆန်ဖို့ ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ချစ်နေကြပါလျက် လုပ်ချင်တာကို လုပ်လိုက်ဖို့ တွေဝေနေကြတယ် ဆိုရင်တော့ ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်မှသာလျှင် စိတ်အဆာပြေမှာပါ။ ဒါမျိုးကိုကြတော့ လုပ်သင့်တယ်လို့ မီးသော်ကြီးထင်တယ်။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လားဟင် ... စာဖတ်နေတဲ့ တယ်ဂျင်းရယ်။
မီးသော်ကြီးကတော့ လုပ်ချင်စိတ် ရှိနေတာကို လုပ်လိုက်ရမှ စိတ်နေပျော်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ ဆိုရင်လည်း ဘယ်တော့မှ နောင်တများ ရလောက်လေမလား ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ မတွေးဘူး။ ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ စိတ်ချမ်းသာသွားတယ် ဆိုရင် အများသူငါအမြင်မှာ ဘယ်လောက် မလုပ်သင့်ဘူး ပြောနေပါစေ မီးသော်ကြီးကတော့ ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ နောင်တရလည်း မီးသော်ကြီးအတွက် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ မီးသော်ကြီး စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရလို့ ကျေနပ်သွားတဲ့ စိတ်အဆာပြေမှုက ဘယ်အရာမှ အစားမထိုးနိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ မီးသော်ကြီးကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရမယ် ပြတ်သားရမယ်ဆိုလည်း ဘယ်တော့မှ ၀န်မလေးဘူး။
ဒါပေမယ့်လေ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ နေရတာဆိုတော့လည်း အချို့အချို့သော ကိစ္စတွေမှာ မီးသော်ကြီးက လိုက်တွက်ကပ်နေမယ်၊ ညစ်ပေါက်ကပ်ကျယ် လုပ်နေမယ် ဆိုရင် မီးသော်ကြီး မြို့ပြင် ရောက်သွားလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဟားဟ ...။ ဒါမျိုးတော့ ဘယ်အဖြစ်ခံလေမလဲနော်။ သူများလုပ်တယ် ဆိုရင်လည်း မီးသော်ကြီး လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်သလို မီးသော်ကြီး လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ အဲဒီင်္တော့ နေထိုင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရယ် လူနေမှူအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အဆင်ပြေစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့အရေး အချို့အရေးပါတဲ့ ကိစ္စလေးတွေမှာ ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်လိုက်ချင်စိတ်လေးကို ချိုးနှိမ်ထားရပါတယ်။ အလိုက်သင့်လေးပေါ့။ ရေလိုက်ငါးလိုက်၊ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး နေနေရပါတယ်။ ဒါတောင်မှ လစ်ရင်လစ်သလို အခွင့်အရေး ရရင်ရသလို အများညီလို့ ဤက ကျွဲ ဖြစ်နေတာတောင် မီးသော်ကြီးက တစ်စင်ထောင်ပြီး ဤဖြစ်အောင် ဤလိုက်သေးတာ။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ ... ၀ါသနာနဲ့ ဗီဇဆိုတာ ဖျောက်ရခက်တယ်လို့ ပြောပြီးပါပကောလေ ...။ အဟိ။ ဟိုဟာ စိတ်ချမ်းသာ ဘာအေးချမ်းတယ် ဆိုလားပဲ....။ - ။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 10:37:00 AM3comments
မီးသော်ကြီး ရေးတဲ့စာတွေ မီးသော်ကြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်တာ ပျင်းတယ် ဆိုတာတွေချည်းပဲ။ အဲလောက်တောင် ကြေညာဝင်ထားမှတော့ ဘယ်သူက မီးသော်ကြီးကို လှည့်ကြည့်ပါတော့မလဲနော်။ ခုတော့ ဓါတ်ပြားဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ပျင်းတာကို စာမစီတော့ပါဘူး။ အားလုံးလည်း သိပြီး ဖြစ်ကြမှာပါ။ ထပ်မပြောတော့ဘူးနော်။
မီးသော်ကြီး ဒီမနက် အိမ်ရှေ့မှာ ထိုင်နေတုန်း မယ်သီလလေးတစ်ပါး အလှူလာခံတယ်။ မီးသော်ကြီး ပြောနေကြအတိုင်း ဆိုရင်တော့ နမ်းမလားရှင် ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ နေရင်းထိုင်ရင်း ကြားထဲကနေ ငရဲ ယူလိုက်သေးတယ်။ အဟိ။ မီးသော်ကြီးလဲ ဆန်လေးယူပြီး နိဗ္ဗာန်နသပစ္စယောဟောတု ဆိုပြီး သူ့အဓိပ္ပာယ်ကို သေချာတော့ မပေါက်ပဲ ပြောပြီး လှူလိုက်ပါတယ်။
မီးသော်ကြီး တွေးမိတယ်။ မီးသော်ကြီးတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက စေတနာ သဒ္ဒါတရား ထက်သန်လွန်းကြတယ်။ အလှူရေစက်လက်နဲ့ မကွာဆိုတာမျိုး။ လှူဖို့အတွက်ဆို တတ်နိုင်သလောက်ကတော့ လူတိုင်းမှာ အဆင့်သင့် ဖြစ်နေကြပြီးသားပါ။ မီးသော်ကြီး ပြောတဲ့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ မွေးဖွား ကြီးပျင်းလာကြတဲ့ လူမျိုးအားလုံးကို ပြောချင်တာပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေ လှူတယ်ဆိုတော့ ငါတို့ တိုင်းရင်းသားတွေကရော မလှူလို့လားလို့ ပြောနေကြဦးမယ်။ ဟုတ်တယ် အားလုံးက လှူတယ်လို့ ဆိုတာနဲ့ စေတနာ သဒ္ဒါတရားတွေက ပေါက်ဖွားလာကြတယ်။ မရှိလို့ မလှူ၊ မလှူလို့ မရှိ ဆိုပြီး တတ်စွမ်းသလောက်ကို လှူကြတယ်။ အချို့ ကြတော့ လှူတာတော့ လှူကြတယ်။ ဒါပေမယ့် စေတနာသန့်ရဲ့လား။ တယ်ဂျင်း တွေးကြည့်လေ။ လှူကြတဲ့ခါ ညောင်စေ့လောက်လှူပြီး ညောင်ပင်ကြီးလောက် ရပါစေတဲ့။ လှူတာတောင်မှ အကျိုးလေး မျှော်ကိုးလို့။ လှူတန်းတဲ့ နေရာတောင်မှ လာဘ်ဆိုတာက နေရာယူနေသေးတာ။ မြန်မာနိုင်ငံသား ပီသအောင် နေကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ။
မီးသော်ကြီး ကြားဘူးတဲ့ ဟာသပဲ ဆိုမလား တကယ်ပါလို့ပဲ ပြော၇မလားမသိတဲ့ ပျက်လုံးဆန်တဲ့ စကားလေး ပြောပြရဦးမယ်။ ဒီလိုလေ အလှူခံ ဌာနတစ်ခုမှာ ကြေညာတယ်ပေါ့။ လှူသွားတဲ့ သူတစ်ဦးက ၁၀၀ကျပ် လှူသွားတယ်ပေါ့။ အဲတာကို ကြေညာပေးတာက ( ဦး/ဒေါ် က ... အလှူတော်ငွေ ၁၀၀ကျပ် ဒါနပါ ဘုရား ) တဲ့။ ကဲ နောက်တစ်ယောက်က ၅၀၀ကျပ် လာလှူသွားတော့ ဘယ်လို အော်လဲဆို ( ဦး/ဒေါ် က ... အလှူတော်ငွေ ၅၀၀ကျပ် မြတ်ဒါန ပါဘုရား ) တဲ့။ အဲတာပဲကြည့်လေ များမှ မြတ်ဒါန ဖြစ်သတဲ့တော်။ လှူတာပဲ စေတနာ ရှိသလောက်ပေါ့။ ပြီးတော့ လှူပြီးမှတော့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတော့လား။ အဲလိုလည်း မဟုတ်ကြသေးဘူး အချို့များပေါ့နော့်။ လှူပြီး နေတာတောင်မှ ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီး အလှူခံလို့ လှူလိုက်ပါတယ် … ပြီးတော့ ဘာလုပ်လိုက်ကြတာ ဆိုပြီး ရှိကြသေးတာ။
မြန်မာထဲကမှ မြန်မာအချို့ ကြပြန်တော့လဲ မြန်မာရည် ၀နေတော့ အလှူခံ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အမျိုးမျိုး ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ရှာကြသေးတာ။ အဲတာမျိုးတွေနဲ့ ပြန်ယှဉ်ရင် သူဖုန်းစားတွေကမှ ဟုတ်နေသေးတယ်။ တောင်းစားတယ်လေ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ။ အလှူခံမဟုတ်ဘူး။ အဲလို ပွင့်လင်း လွန်းတာကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။ ညမာပြည်မှာ အဲလူတွေကလည်း ရှောင်မလွတ်ပဲ။ အေးလေ တောင်းတိုင်းသာ ပေးနေရမယ် ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည်က သူတောင်စားတွေ သူဌေးဖြစ်နေတာ ကြာပြီပေါ့။ အလှူခံဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက်က အလှူခံတွေပဲ ကောင်းပါတယ်လေ။ ရာထူးချင်း တူရင်တောင်မှ ဂုဏ်ရှိတာပေါ့။
အမှန်တကယ်ဆိုရင် အဓိက တရားခံက မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါ။ စေတနာ သဒ္ဒါတရားတွေက အမြဲတမ်း ထက်သန်နေကြလေတော့ မှန်သည် မှားသည် မရှိတော့ဘူး အလှူဟေ့ဆို လှူချင်ကြ လှူပြီးသားကြတွေချည်းပါပဲ။ အဲကြောင့် လှူသမျှ အကြိမ်တိုင်းက စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးသား ဖြစ်နေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စေတနာ သန့်ကြပါစေ။
အဲတော့ မီးသော်ကြီးလည်း ခါတော်မှီလေး အလှူခံမလားလို့ပါ။ ဘလော့လာလည်တဲ့ သူတွေဆီကပေ့ါ။ ဖြစ်တယ်မလား။ ဟုတ်ကဲ့ ... ရွာက ထန်းပင်ကြီး ထီးတင်ရန်နှင့် ဇီးပင်ကြီး ရွှေချရန် ... မီးမီးသော်ကြီးရဲ့ ဒီဘလော့ကနေ အလှူခံနေပါတယ်လို့။ လှူလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ သဒ္ဒါတတ်အား များများမဆို လာရောက် လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း။ - ။
စာကြွင်း။ ။ မီးသော်ကြီး မြင်သမျှ တွေ့သမျှကို ရေးလိုက်တာပါ။ အားလုံးက ဒီလိုပါလို့တော့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အလှူခံ ဆိုတဲ့ နေရာမှာလဲ မီးသော်ကြီး ပြောချင်တာက ဘာသာရေးမှာရယ်လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ ကိစ္စပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်မကတဲ့ ကိစ္စတွေ များစွာထဲကမှ အချို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ အမှန်တစ်ကယ် သဒ္ဒါတရား ပွားများပြီး စေတနာ ရက်ရက်ရောရောနဲ့ လှူဒါန်းနေကြသူတွေလည်း အပုံအပင်ပါ။ အဲတာမျိုးတွေကြတော့ မီးသော်ကြီးတို့က သာဓုကို အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိပါတယ်။ မီးသော်ကြီး ဆိုလိုချင်တာကို နားလည် သဘောပေါက် ကြမှာပါ။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 11:30:00 PM 1 comments
တကယ်ဆိုရင်တော့ မီးသော်ကြီး ဘလော့မှာ ပို့စ်အတင်နည်းတာ မီးသော်ကြီးစာရေးပျင်းလို့ပါ။ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းဆိုတဲ့ အရာလည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ပေါ့လေ။ မီးသော်ကြီးလေ စာကို မဖြစ်မနေ ဆိုတာမျိုးတော့ မရေးချင်ဘူး။ တင်ချင်တာပေါ့ရှင်။ ပို့စ်အသစ်တွေကို ရွှတ်ခနဲ၊ ရွှတ်ခနဲ နေအောင် တင်ချင်တာပေါ့။ အဲကြောင့် သူများပြောတာ ကြားဘူးတာကတော့ လောကကြီးမှာ မလှတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ မရှိဘူး။ ပျင်းတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ။ မီးသော်ကြီးလည်း ထိုနည်း၎င်းပေါ့။ မီးသော်ကြီးကို အကြံပေးကြတယ်။ သူငယ်ချင်း အချို့ကပေါ့။ နင့်ဘလော့ စာမှ မတင်ဖြစ်ရင်လည်း ပိတ်လိုက်ပါတော့လားတဲ့။ မီးသော်ကြီး တွေးတယ် ... အဲလိုလည်း မဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ မီးသော်ကြီး သေမလောက် ရေးချင်တဲ့ နေ့ကြတော့ ဘယ်မှာ သွားရေးရမလဲပေါ့နော်။ ကိုယ့်ဘလော့မှာ ကိုယ်ရေးမှသာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ရေးခွင့်ရှိမယ်လေ။ အဲဒီတော့ ဒီချောက်ကပ်ကပ် ဘလော့လေးကိုလည်း ပိတ်လိုက်လို့ မဖြစ်သေးပါဘူးလေ။ စိတ်အဆာပြေလေး ရေးဖို့တော့ ထားရဦးမယ်လေ ... နော် ...။
ခုလည်း မီးသော်ကြီး စာရေးချင်လာတယ်လို့ ခံစားမိလို့ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်ရေးရင်း စဉ်းစားနေတယ်။ မီးသော်ကြီး ခုတလော စဉ်းစားမိတာက (( အချစ် )) ဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ။ သေချာ တွေးလေ မသိလေ။ မသိဘူးလား ဆိုတော့လဲ သူစိမ်း မဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သိလား ဆိုပြန်တော့လဲ သူက မသိသလို လုပ်နေပြန်ရော။ ဆိုးပါ့နော် ...။ ထိုအရာ ဘယ်လောက် စိတ်ရှုပ်ဖို့ ကောင်းသလဲဆို စတောင်မှ မစရသေးဘူး လူကို အရူးလုပ်နေတယ်။
မီးသော်ကြီး နဲ့ ထိုအရာလည်း မသိလိုလိုနဲ့ သိနေပြီး၊ သိသလားဆို တွေးလိုက်တော့ မသိသလိုလိုကြီး ဖြစ်နေပြန်ရော။ တကယ်တော့ ၁၀ ကျော်သက် အရွယ်ကစလို့ လူုတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ဘူးတာ အဲသူစိမ်းဆန်လှတဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာပဲပေါ့။ မီးသော်ကြီးတို့လဲ ရှောင်လွဲပြီး မဖြတ်သန်းခဲ့ပါဘူး။ ရင်းရင်းနှီးနှီး ငယ်ပေါင်းတစ်ယောက်လို သူနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့သေးတာ။ ( ကြေညာလိုလို ဘာလိုလို ... အဟိ ) ဒါပေမယ့် သူက မီးသော်ကြီးကို ရင်းနှီးအောင် မနေခဲ့ဘူး။ သူများတွေပြောတဲ့ ရင်ခုန်တာကို အချစ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တို့၊ အကြည့်ချင်းဆုံ ရင်ခုန်တယ်တို့၊ အဲတာတွေကို မီးသော်ကြီး သူနဲ့ ( အချစ် )နဲ့ ခင်နေတုန်းက မရိုးအောင် သုံးခဲ့တာပေါ့။ သူက ( အချစ် )လည်း စကားလုံးတွေကို မထပ်အောင် ထုတ်ပေးနေတယ်လေ။ မီးသော်ကြီးလည်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး နေပစ်ခဲ့တာပေါ့။ သူ့ကိုလည်း မီးသော်ကြီးနဲ့ အမြဲ နေလေလိမ့်မလား ဆိုပြီး သိပ်တော့ အရေးတစ်ယူ မပြုမိခဲ့ဘူး။ မီးသော်ကြီးလည်း ဒီလိုနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းနေခဲ့တာပေါ့။ ဗြုန်းဆို ... မီးသော်ကြီး သတိရလို့ ဘေးနားကို ကြည့်လိုက်တော့၊ သူက မီးသော်ကြီးနဲ့ ပါမလာတော့ဘူးလေ။ အဲတာ သူ့ကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း တန်ဖိုးရှိပါလား ဆိုတဲ့ အသိ ရှိလာချိန်ရောက်တော့ သူက မီးသော်ကြီး အနားမှာ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ အရမ်းရင်းနှီးပြီး မရင်းနှီးအောင် နေသွားတဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့ ထိုအရာကို မီးသော်ကြီးက ဘယ်လို နားလည်ရတော့မလဲနော်။
မီးသော်ကြီးလေ သေချာစဉ်းစားတယ်။ မီးသော်ကြီးရဲ့ အချစ်က ဘယ်လို အချစ်မျိုးများလဲဆိုပြီး။
ညောင်ပင်လို အချစ်။ ။ ညောင်ပင် တစ်ပင် ဖြစ်လာဖို့ ညောင်စေ့ကနေ စခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့။ ညောင်စေ့ လေးကနေ ကြီးမှားလှတဲ့ ညောင်ပင်ကြီး ဖြစ်လာဖို့ အချိန်ကာလ ကြာမြင့်မှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရလောက်အောင် ကြာမြင့်လှတဲ့ အချစ်။ အဲဒီ ကြီးမားလှတဲ့ ညောင်ပင်ကြီး ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် စွဲမြဲစွာ ကုတ်တွယ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ အမြစ်တွေလို ခိုင်မာလှတဲ့ အချစ်။ သူ့ရဲ့ အရွက်တွေကြောင့် အေးမြနေတဲ့ အရိပ်မှာ လာရောက် ခိုလှုံသူတွေ စိတ်အေးချမ်းသာ အမောပြေစေနိုင်သလို အေးမြတည်ငြိမ်လှတဲ့ အချစ်။ အားလုံး စုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်တည်း စွဲမြဲစွာ ချစ်နေပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ အချစ်မျိုးပေါ့။-။
လိမ္မော်ပင်လို အချစ်။ ။ လိမ္မော်ပင် ဆိုတာ တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်သီးတယ်။ အသီးသီးချိန် ရာသီဆိုရင်လည်း မြောက်များစွာသီးတယ်။ ပြီးတော့ နှစ်တိုင်းသီးတယ်။ စုပြောရမယ်ဆိုရင် အကြိမ်ကြိမ် ချစ်တယ်။ အချစ်တွေ များကြီးလည်း ရှိတယ်။ တစ်ကြိမ် ချစ်ပြီးတိုင်းလည်း နောက်တစ်ကြိမ် ချစ်သေးတယ်။-။
ဂျပန်မြက်လို အချစ်။ ။ ဂျပန်မြက်လို့ ဆိုမလား မီးသော်ကြီးတော့ အဲလိုပဲခေါ်တယ်။ အလှမွေး မြက်ကလေးတွေ။ ရိတ်လေ ထွက်လာလေ။ အဲလိုပဲ ဒီတစ်ယောက် ချစ်ပြီးလည်း နောက်တစ်ယောက်။ နောက်တစ်ယောက် ပြီးသွားလည်း နောက်တစ်ယောက်။ ဘယ်တော့မှ ကုန်သွားတယ် မရှိတာမျိုးနဲ့ တူတဲ့ အချစ်။-။
ကြက်ဆူပင်လိုအချစ်။ ။ ဒါကတော့ ညမာပြည်တွင်းမှာ နေတဲ့သူတွေ ပိုသိပါတယ်။ မဖြစ်မနေ ဆိုတာမျိုး။ မစိုက်ချင်လည်း စိုက်ရတယ်။ နေရာဒေသလိုက်လို့ မဖြစ်ထွန်းန်ိုင်မှန်း သိပေမယ့်လည်း စိုက်ရတယ်။ ရှင်သန်တာ မရှင်သန်တာနောက် စိုက်ဆို စိုက်ရမယ်။ မချစ်ချင်လည်း ချစ်ရမယ်။ မချစ်ပေမယ့်လည်း ချစ်ရမယ်။ မဖြစ်မနေ ချစ်ရမယ့် အချစ်မျိုးပေါ့။-။
အဲလိုတွေ ပေါက်ကရတွေးပြီး တွေးကြည့်လိုက်တော့ မီးသော်ကြီးရဲ့ အချစ်က ညောင်ပင်လို အချစ်မျိုး မဖြစ်တာတော့ ကျိန်ပြောစရာကို မလိုအောင် သေချာတယ်။ အဟီး။ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖေါ် မသူတော် ဖြစ်မှာစိုးလို့ အကျယ်မချဲ့ပါရစေနဲ့နော်။ ဂျပန်မြက်လိုလည်း ခဏတိုင်းတော့ မချစ်ခဲ့ပြန်ဘူး။ ကြက်ဆူပင်လိုလည်း မဖြစ်မနေက လုံးဝမရှိခဲ့ဘူး ဆိုတော့ ... နောက်ဆုံး လိမ္မော်ပင်လို အချစ်မျိုးပဲ ဆိုကြပါစို့။ သူနဲ့ အမြဲတမ်း ရင်းနှီးခဲ့ပေမယ့် မီးသော်ကြီးကိုတော့ သူက ယခုတိုင် သူစိမ်းဆန်နေဆဲပဲလေ။ လိမ္မော်ပင်ပျိုတွေလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပင်အိုတွေလိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရာသီရောက်တိုင်း တာဝန်ကြေစွာ အသီး လှိုင်နေသလိုပါပဲ။ နှစ်တိုင်း တာဝန်မပျက် သီးလာပေမယ့်လို အရသာရှိဆဲ ...။
ထို့အတူ မီးသော်ကြီးရဲ့ လိမ္မော်ပင်နဲ့ တူတဲ့ အချစ်တွေကလည်း ... ချိုမြိန်ဆဲ ... မရင်းနှီးခဲ့ပေမယ့် ရင်းနှီးနေဆဲ။ ကဲ ... သူငယ်ချင်းများရဲ့ အချစ်တွေကရော ဘယ်အပင်လိုများ ဖြစ်နေမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မညာတမ်း တွေးကြည့်ကြပါဦးနော်။ - ။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 10:52:00 PM4comments
ဒါ ... အိပ်မက်လား
မီးသော်ကြီး ရင်တွေ ခုန်လိုက်တာနော် ...။ ဘယ်လို ပြောရမလဲ ဒီခံစားချက်ကို ဘယ်လို ဖွင့်ဆိုရမလဲ။ ခြေဖျား လက်ဖျားတွေ အေးစက်၊ နားရွက်ဖျားတွေ ပူထူ၊ ရင်ခုန်သံတွေက တစ်ဒုံးဒုံး။ ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်သလို ဆိုတာမျိုးလား။ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမယ်ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိနိုင်တော့ဘူး။ အို ... ခြေလှမ်းတွေလည်း အမှားမှား အယွင်းယွင်းနဲ့။ ဒီလျှောက်လက်စ လမ်းကလေးတောင် ဆုံးထိတိုင်အောင် ခြေလှမ်းမှန်စွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါတော့မလား။ နောက်ကျောပဲ မလုံတော့သလို၊ ရှေ့မှာပဲ တံတိုင်းကြီးတွေများ ကာဆီးထားလေသလား။ အို ... အို ...။
သူ … အကြည့် တစ်ချက်လေးအတွင်းမှာ မီးသော်ကြီးတစ်ယောက် အယောင်ယောင် အမှားမှားနဲ့ ဘာတွေ လှုပ်ရှားမိကုန်လဲဆိုတာ သေချာ မသိတော့ပါလား။ လူ့ဘ၀ လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတာ ရှည်လျှားလှတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီတစ်ခဏတာလေးဟာ မီးသော်ကြီးအတွက်တော့ တစ်ကမ္ဘာတစ်မျှ ကြာရှည်လိုက်တာနော် ...။ မီးသော်ကြီးရဲ့ အသိနဲ့ သတိတွေ ဘယ်တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီင်္လဲ။ ဒီလောက်ကြီး ဗြောင်းဆန်သွားရအောင် မီင်္းသော်ကြီး နင်ဟာ ၁၀ ကျော်သက်လေးလား။ သစ်ရွက်ကလေးတွေ လေတိုက်လို့ လှုပ်တာကို ဟာသလို့ထင်ပြီး ရယ်မော ပျော်ရွှင်နေမိရလောက်တဲ့ ၁၀ ကျော်သစ်တစ်ယောက်ဘ၀ကို နင်တစ်ယောက် လွပ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ စိတ်တိုင်းကြ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီ မဟုတ်ဘူးလား။ ဘာကိုမှ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လိုတော့ နင်မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ပြောလည်းခံရယုံပဲ။ သူ့အကြည့် တစ်ချက်လေးအတွင်းမှာ အဲလောက်တောင် ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လေ။ သူကတော့ မျက်လုံးလေး အကြည့်တစ်ချက်ပဲပေါ့။ သူ --- ဒင်းနစ်။
ဟယ် ... ပန်းစည်းလေး ကိုင်လို့ စေါင့်နေပါလား။ ငါ့ကို ပေးတော့မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်လေ။ ဘာကြောင့်များလဲ။ မီးသော်ကြီးကိုမှ ဒီနေရာလေးမှာ အမြဲရပ်လို့ စောင့်စောင့်နေခဲ့တာ။ မီးသော်ကြီး သိပ်သတိထားမိတာပေါ့။ သူ့ရဲ့ ညိုမှောင်နေတဲ့ မျက်လုံးညိုကြီးတွေနဲ့ အမြဲစိုက်လို့ ကြည့်ကြည့်နေခဲ့တာ။ အခါအားလျှော်စွာ ပန်းစည်းတွေ၊ အရုပ်လေးတွေကို ပေးတတ်သေးတယ်လေ။ ခုလဲကြည့်လေ ပန်းစည်းအကြီးကြီးနဲ့ မီးသော်ကြီးကို စောင့်နေပြန်ပါပြီ။ ခြေလှမ်းတွေလည်း ယောင်မှားစ ပြုလာပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဟော ... သူနောက်ကနေ လိုက်လာပြီ။ ရှေ့ဆို အိမ်ကို ရောက်တော့မယ်။ သိပ်မလိုတော့ဘူး။ ခေါင်းကို ငုံ့ထား မီးသော်။ ကဲ - အိမ်ရှေ့ရောက်ပြီ။ အယ်တော့ ... သူလေ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ မီးသော်ကြီးကို ပန်းစည်း အတင်းပေးသွားပြီး လှည့်ပြန်သွားပြီ။ နားလည်ရ သိပ်ခက်ပါလား သူရယ်။ အော် ... ပန်းစည်းထဲမှာ ကဒ်လေးတစ်ခု။ ဟယ် ... ဗယ်လင်တိုင်းမှာ သူ ချောကလက် လက်ဆောင် ပေးပါရစေတဲ့လေ။ သူ --- ဘရက်ပစ် ( မီးသော်ကြီး အခေါ် = ဘလွတ်ပစ် )
( တင်းတောင်… ) တံခါးဘဲလ်သံပါလား ...။ ဘယ်သူပါလိမ့် ဒီလောက် စောစောကြီး။ စိတ်ရှုပ်လိုက်တာနော်။ အိပ်ရေး မ၀သေးပါဘူးဆိုမှ ...။ စောစောစီးစီး အနှောက်အယှက်က ပေါပါ့။ ဆိုးပါ့ ... ဒီမနက်ကတော့ good morning မဖြစ်နိုင်တော့ပါလား။ ဟမ် ... ဘလွတ်ပစ်နဲ့ ဒင်းနစ်ပါလား ...။ ဘာတွေလဲ ... ဘုရား ဘုရား ...။ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီ။ မဟုတ်သေးပါဘူးနော်။ အမ် ... နှစ်ယောက်လုံးက ပန်းစည်းတွေ ချောကလက်တွေနဲ့။ တစ်ယောက်က နှင်းဆီပန်း အဖြူလေး တစ်ပွင့်ထဲနဲ့ အသဲပုံ ချောကလက်တစ်ခု။ နောက်တစ်ယောက်က နှင်းဆီပန်း အနီလေး တစ်ပွင့်နဲ့ ချောကလက်။ ဘာတွေလဲ ... ဘာတွေလဲဟာ။ ဟာ ... လုပ်ပြန်ပြီ သူကျွေးတဲ့ ချောကလက်စားပါ၊ ငါကျွေးတဲ့ ချောကလက်စားပါနဲ့။ အာရုဏ်တွေ နောက်လိုက်တာနော်။ မီးသော်ကြီး ဘာပြောရမလဲ၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။ အဲ ... အဲ ... နှစ်ယောက်လုံးက ဒူးထောက်လိုက်ကြပြီ အဖြေကို တောင်းကြတော့မှာလား ...။ မီးသော်ကြီးရဲ့ လက်တစ်ဖက်စီကို ၂ ယောက်သား ပြိုင်တူ ဆွဲလိုက်ကြတယ်။ မီးသော်ကြီး ဘာလုပ်ရမလဲ ... မျက်လုံးကို စုံမှိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ မီးသော်ကြီးရဲ့ ညာဘက် လက်ကို နမ်းနေတယ် ...။ ဘယ်သူပါလိမ့်။ မီးသော်ကြီးလည်း အာရုဏ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ ဘယ်တစ်ယောက်က ညာဘက် ဘယ်တစ်ယောက်က ဘယ်ဘက်ဆိုတာ လုံးဝ သတိမထားလိုက်မိဘူး။ ဘယ်သူပါလိမ့်နော် ...။ ကဲ ... သေချာသွားအောင် မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် ... မှန်းစမ်း ...။ ဟမ် ... အမြှီးနဲ့၊ ဟာ ...။ ဘယ်တွေ ရောက်ကုန်ကြပြီလဲ ဘလွတ်ပစ်ကော ဒင်းနစ်ကော ...။
အမြှီးလေး တစ်နန့်နန့်နဲ့ မီးသော်ကြီး အချစ်တော် ခွေးမလေး အောကစ်။ အော် ... မီးသော်ကြီး နေ့ခင်းကြီးမှာ အိပ်ပျော်ပြီး အိမ်မက်လှလှ တစ်ဝကြီး မက်နေရှာသကိုး ...။ မီးသော်ကြီး မွေးနေ့မှာ အိမ်တံခါးမကြီးကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပန်းစည်းတွေက ဝေါကနဲ့ အိမ်ထဲကို ပြိုဆင်းလာမလား ဆိုပြီး စိတ်ကူး အတွေးချော်ပြီး အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ... ခွေးမကလေးက တစ်အီအီနဲ့ လာနိုးတော့မှပဲ ...။ အဟိ။-။
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 11:42:00 AM3comments
မီးသော်ကြီး တစ်ယောက် ပျင်းရိခြင်းအကြောင်း တစ်ရား ၆ ပါးကနေ တစ်ပါးမှ မလွတ်ပဲ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ပျင်းရိနေခဲ့လိုက်တာ ဘလော့လေးနားကို ယောင်လို့တောင်မှ မရောက်မိခဲ့ပါဘူး။ ဘလော့လေးခမျာမလဲ သနားဖို့ ကောင်းလောက်အောင် ချောက်ကပ် တိတ်ဆိတ်နေရှာတယ်။ မီးသော်ကြီးက အရာရာကို လစ်လျှူရှုပြီး နေခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိူးကြောင့် တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲ စာမရေးဖြစ်တာလည်း ပါတာပေါ့လေ။ ပျင်းတာနဲ့ နားပင်းတာ ရောနေတယ်ဆိုပါတော့။ မီးသော်ကြီးလဲ ဘလော့မှာ လာရောက်သူကို အားတွေလည်းနာ စော်ကားသလို ဖြစ်မိတာတွေကိုလည်း တွေးမိပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို မလုံသလို ခံစားနေရတာ။ ရေးမယ်၊ ရေးမယ်နဲ့ စိတ်ထဲမှာပဲ စာတွေစီနေတာ လက်တွေ့မှာတော့ ဘာကိုမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ပျင်းပါတယ် ဆိုနေမှ အင်တာနက်ကော်နရှင်တွေက ပျက်ကူပေးလိုက်သေးတယ်။ မီးသော်ကြီးတို့ ကံကောင်းလိုက်ပုံများနော်...။ အမှန်တော့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တယ်ဆိုတာ ကံချည်းနဲ့ပဲ ဆိုင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့ စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကံမရှိ ဥာဏ်ရှိတိုင်းမွဲ ဆိုလား။ အမှန်ကတော့ အဲစကားက မီးသော်ကြီး ဘလော့မှာ စာမတင်ဖြစ်တာနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။ မီးသော်ကြီးက ၀ီရိယကော လုံ့လကော မရှိတာ။ ဘလော့လေး လုပ်ထားပါတယ် ဆိုမှတော့ စာကို ဂရုတစိုက်လေး ရေးသင့်တာပေါ့နော့်။ မီးသော်ကြီး အကြောင်းကို သိတဲ့သူ တစ်ယောက်က ဘယ်လိုပြောလဲဆို စာရေး ဒီလောက်ပျင်းတဲ့ သူက ဘလော့များ သွားလုပ်နေသေးတယ်တဲ့။ အမှန်တော့ မီးသော်ကြီးက သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင်တာ။ စပ်စလူးပိုးကို ဓါတ်လိုက်သလိုပဲ၊ ဘလော့ လုပ်ချင်လှပါချည်းရဲ့ ဆိုပြီး အများတကာကို နားပူနားဆာလုပ်၊ ပြီးတော့လည်း ခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ လူဆိုတာ လုံ့လ၀ီရိယလေးတော့ ထားသင့်တာပေါ့။ မီးသော်ကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၊ သူ့ရဲ့ အဖွားဆို အမြဲဝီရိယထားဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ သူကတော့ ဘယ်လို ဥပမာနဲ့ ပေးလည်းဆိုရင်၊ ကန်တော့ပါရဲ့ ခွေးဖြစ်ရင်တောင်မှ ပျင်းနေရင် မစင်ပူပူနွေးနွေး ဘယ်တော့မှ စားရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့လေ။ သူပြောတာက စကားလုံးတွေက ရိုင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ထိရောက်တယ်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်နေတာပါပဲ။ မီးသော်ကြီးကတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ၀ီရိယအကျိုး စောစောနိုး၊ သူခိုးတုတ်နဲ့ရိုက် ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ စောစောမထဘူး။ ခုကတော့ အိပ်ရာစောစော မနိုးယုံတင်မဟုတ်ဘူး ဘလော့ကိုပါ ဥပေက္ခာ ပြုနေတာ။ မီးသော်ကြီး တောင်းပန်းပါတယ် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရယ်။ ( စိုင်းစိုင်းစတိုင်လ်နဲ့ ပြောကြည့်တာ၊ ငပေါကြီး ကျနေတာပဲ )။ မီးသော်ကြီး ပို့စ်တွေကို တစ်နေ့တစ်ခု မဟုတ်တောင် ခုလောက်ကြီး ရက်ကြာကြီး မတင်ဖြစ်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ့မယ်လို့ ပြောပါရစေနော်။ လာလည်ပါ၊ ပျင်းစရာ အကောင်းဆုံး ဘလော့တစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် လမ်းကြုံရင် ၀င်လာပါလို့။ ပြီးတော့ ဝေဖန်ပါ အကြံပြုပါလို့......
စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 11:35:00 PM 1 comments
ကျွန်မ အနှစ်သက်ဆုံး စာမျက်နှာများ